မိုးမခ မီဒီယာ - MoeMaKa News & Media: November 2007
ူပည်တငြ်းရေးရာ သတင်းတိုထြာ - မင်းမဲ့စရိုက်ူမန်မာူပည်
ပြည်တွင်းရေးရာ သတင်းတိုထွာမိုးမခ (ရန်ကုန်)နိုဝင်ဘာ ၃၀၊ ၂၀၀၇ ယနေ့မနက်တွင် ၈၈ မျိူးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုဌေးကြွယ် မိခင် ကွယ်လွန်သွားကြောင်း သတင်းကြားရပါသည်။ ကဗျာဆရာ နွယ်စိမ်းဝေ က လူထုဒေါ်အမာမွေးနေ့တွင် အောင်ဝေး ကဗျာ ကို ပရိသတ်သို့ ဝေခဲ့သဖြင့် ဖမ်းဆီးခံထားရပါသည်။ မဂ္ဂင်ကျောင်းမှ သံဃာတော်များကို စစ်အစိုးရက လမ်းပေါ် နှင်ချပြီးနောက်၊ ၀င်ရောက် ကူညီ လက်ခံထားသော ဘုန်းကြီးကျောင်းများ၊ ရဟန်းသံဃာများ နှင့် ပြည်သူလူထုအားလုံးကို စစ်တပ်က တားဆီးခြိန်းခြောက်လျှက်ရှိသည်။ ဓာတ်ပုံ - ကမ္ဘောဒီးယားသွားတဲ့ နအဖ ၀န်ကြီးချုပ် သိန်းစိန်ကို ကြိုဆိုနေကြစဉ် - အေဖက်ပီ Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to Facebook
Reactions: မဂ္ဂင်ကေဵာင်းတိုက်ကို စစ်အာဏာရင်ြမဵား ခဵိတ်ပိတ်ူခင်းသာသနာ့မောဠိ အဖြဲႛခဵပ်ြက ကန်ႛကကြ်
မဂ္ဂင်ကေဵာင်းတိုက်ကို စစ်အာဏာရင်ြမဵား ခဵိတ်ပိတ်ူခင်းသာသနာ့မောဠိ အဖြဲႛခဵပ်ြက ကန်ႛကက်ြမိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၂ိုံဝင်ဘာ ၂၉၊ ၂၀၀၇ အောက်ပၝအတိုင်း ဖော်ူပထားသည်ကို တြေႛရသည်။ အူပည့်အစုံကို သာသနာ့မောဠိ အင်တာနက် စာမဵက်ြိာံတငြ် ရယိူိုံင်ပၝသည်။ " … စစ်အာဏာရင်ြမဵားအနေိံငြ့် မဂ္ဂင်ကေဵာင်းတိုက်အား ခဵိတ်ပိတ်ပင်ူခင်းသည် မတရားသော လုပ်ရပ်ူဖစ်၍္ဘပည်ပ ရောက်သံဃာတော်မဵားအနေိံငြ့်ူပင်ူးပင်းထန်ထန် ကန်ႛကက်ြရတ်ြခဵသည်။ မဂ္ဂင်ကေဵာင်းတိုက်အား အူမန်ဆုံူးပန်လည်ဖငြ့်လစြ်၍ ကေဵာင်းနေ သက်တော်ရစ်ြဆယ်ကေဵာ် ဆရာတော်ဋ္ဌကီးအပၝအ၀င် အရယ်ြမရောက်သေးသော ရင်ြသာမဏေမဵာိးံငြ့် HIV/AIDS ဝေဒနာရင်ြမဵားအား မူလအတိုင်ူးပန်လည် နေထိုင်ခငြ့်ူပရြန် အာဏာရင်ြစစ်အုပ်စုအား လေးလေးနက်နက် တောင်းဆိုလိုက်သည်။္ဘပည်တငြ်းရြိ ဆရာတော်သံဃာတော်မဵားအနေိံငြ့်လည်း သံဃာ့ညီညတ်ြမကြိုရြေးရြ၍ မည်သိုႛသော အိံ္ဇရာယ်ိံငြ့်ုကြံတြေႛနေရသည်္ဘဖစ်ပၝစေ၊ ဗုဒ္ဌသားတော်အခဵင်းခဵင်း မေတ္ဇာရြေႚထား၍ ခိုကိုးရာမဲ့နေသော ဆရာတော်ုကီိးံငြ့် သာမဏေငယ်မဵားအား မိမိတိုႛကေဵာင်းတိုက်မဵား၌ ယာယီနေထိုင်သီတင်းသုံးခငြ့်္ဘပြုကပၝရန် ရိုသေလေး္ဘမတ်စြာ လြေဵာက်ထားအပ်ပၝသည်ဘုရား၊၊ ။ … " http://moemaka.com/images/stories/monks/Sasana-moli-5-2007.pdf Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to Facebook
အရင်ြဉာဏိက - သပိတ်မြောက် ရဟန်းတော်မဵားသိုႚ
သပိတ်မြောက် ရဟန်းတော်မဵားသိုႚ အရင်ြဉာဏိကိုံဝင်ဘာ ၂၉၊ ၂၀၀၇ ယခုအခဵိန်အခၝသည် ဗုဒ္ဌအဆုံးအမတရားတော်မဵားကို ပိဋကကဵမ်းစာတော်လာအတိုင်း မနြ်မန်ြကန် ကန် ဟောေူပာညနြ်ုကားရန်၊ လေ့လာသင်ုကားရန်၊ ပြားမဵားအားထုတ်ိုိံင်ရန်ိံငြ့် ရဟန်းတော်မဵား၏ ဘ၀လုံ္ဘခြံမအြတက်ြပၝ အဆုံးရြားဆုံး အပိတ်အပင် အြေိာံင့်အယကြ် အခံရဆုံးအခဵိန်ူဖစ်ပၝသည်။ ပခုက္ကတြငြ်ူဖစ်ပဵက်ခဲ့သော ရဟန်းတော်မဵားအပေၞ ရိုင်းပဵစြာ ညငြ်းဆြဲိံပ်စက် ဖမ်းဆီးခဵပြ်ြေိာံင်မမြဵားမြ သည်ူမန်မိာုိံင်ငံ တနံတလဵား ရဟန်းတော်မဵား၏္ဘငိမ်းခဵမ်းစြာ ဆိံ္ဋဖော်ထုတ်ခဲ့မမြဵားကို အုကမ်းဖက် နည်းမဵာူးဖင့် ရိုက်ပုတ်ညငြ်းဆဲ၊ ကေဵာင်းတိုက်မဵားအတငြ်း အခဵိန်မတော် စီးနင်းဝင်ရောက်ကာ ရဟန်း တော်မဵာိးံငြ့် သံဃာပိုင်ပင်္စည်းမဵားကို လုယက်ဖဵက်ဆီူးခင်းမဵားကိုလည်း မင်းမိုက်စရိုက်ူဖင့် တရား လက်လတြ်ူပလြုပ်ခဲု့ကပၝသည်။ သံဃာတော်မဵားအပေၞ ရိုင်းပဵစြာ မတရာူးပမြူခဲ့မမြဵားအတကြ် ၀န်ခဵတောင်းပန်ရန် သံဃာတော်မဵား ၏ တောင်းဆိုခဵက်ကိုလည်း မထေမဲူ့မင် လဵစ်လဵြူပကြာ ပိုမိုဆိုးရြားသော အူပအြမူမဵား၊ စပ်ြစြဲေူပာဆို မမြဵားကိုသာ ဆက်လက်၍ူပလြုပ်လာသည်ကိုလည်း တြေႛူမင်ုကရပၝသည်။ သံဃာတော်မဵားကို ဖမ်းဆီြးိံပ်စက်ညငြ်းဆဲမမြဵား၊ထောင်သငြ်းအကဵဉ်းခဵမမြဵား၊သီတင်းသုံးရာ ကေဵာင်း တိုက်မဵားအတငြ်း မနေိုိံင်အောင် အမဵြိးမဵြိးသော ဖိအားပေူးခိမ်းေူခာက်မမြဵား၊ အသြား အလာခက်ခဲ အောင် မေူးမန်းစစ်ဆေးဟန်ႛတားမမြဵား စသူဖင့် ရဟန်းတော်မဵား သာသနာ့ကိင်္စမဵားကို စိတ်အေး ခဵမ်းသာစြာ လုပ်ခငြ့်မရအောင်ြေိာံင့်ယက်ြမမြဵာူးဖင့် သာသနာတော် အသရေညြိးံမြ်းမြေးမြိန်အောင်ူပလြုပ်နေစဉ်မြာပင် အူခားတစ်ဖက်မြာတော့ အာဏာရင်ြမဵား ဋ္ဌကြိးဆြဲရာကမည့် ဆရာတော်အခဵြိႛထံ ခဵဉ်းကပ်၍ ဘြဲႛထူးဂုဏ်ထူးမဵား အမဵြိးမဵြိးတီထင်ြဆက်ကပ်ူခင်း၊ သူဋ္ဌကီးဘုရား ရြာသားကောင်းမြူဖင့် သဒ္ဌၝတု စေတနာတု ကေဵာင်းတိုက်ဋ္ဌကီးမဵားကို ဆောက်လုပ်လဒြၝန်ူးခင်ူးခင်း၊ မိမိတိုႛအလိုကဵ တရား တော်မဵားကို ဟောုကာူးပစေူခင်း စသူဖင့် ဘာသာ သာသနိာံငြ့် ရဟန်းတော်မဵားဂုဏ်သိက္ခာကို ထိ ခိုက်ညြိးံမြ်းစေိုိံင်သော အူပအြမူမဵားကိုလည်း ပေၞပေၞထင်ထင်ူပလြုပ်နေုကပၝသည်။ ယခုကဲ့သိုႛသော အေူခအနေဆိုးမဵြိးအောက်၌ အာဏာရင်ြအစိုးရက ဋ္ဌကီးမြူးပလြုပ်မည့် စာမေးပြဲမဵားမြ ထက်ြပေၞလာမည့် ရလဒ်သည်လည်း စက္ကဘြဲႛလက်မတ်ြတစ်ခုထက် ပိုမို၍ မည်သည့်အဓိပဍ္ဎၝယ်မ္တွ ဆောင်ိုိံင်မည် မဟုတ်ဟု ယူဆမိပၝသည်။ ယခုအခဵိန်သည် သံဃာတော်မဵား၏ အစိုးရအပေၞ ၀ိနည်းကိံငြ့်အညီ ပတ္ဇနိက္ကဇ္ဆြနကံဆောင်ထားဆဲ လည်ူးဖစ်ပၝသည်။ အစိုးရက ဋ္ဌကီးမြးကဵင်းပမည့် စာမေးပြဲမဵားကို ၀င်ရောက်ေူဖဆိုခင်ူးဖင့် အစိုးရလုပ်ရပ်မဵားကို အားပေး ရာရောက်သည့်အူပင် အကဵဉ်းထောင်မဵားအတငြ်း အဖမ်းဆီး အြိံပ်စက်ခံနေုကရ၊ ပုန်းအောင်းတိမ်း ရြောင်ေူပးလြားနေုကရသော ဘုရားတပည့်တော်မဵား နောင်တော်ညီတော်မဵား၏ ဆင်းရဲဒုက္ခအ၀၀ ကိုလည်း မ္တွဝေ၍ ခံစား နားမလည်ပေးရာ ရောက်ပၝသည်။ သိုႛအတကြ်ူပည်တငြ်းမြ သမဂ္ဂရဟန်းတော်မဵား၏ စာမေးပြဲကို သပိတ်မြောက်ုကရန် ပန်ုကားခဵက်ကို ဘုရားတော်မဵာူးပည်ပရောက် ရဟန်းတော်မဵားအနေိံငြ့်လည်း သဘောတူထောက်ခံအားပေးပၝေုကာင်း၊ နောင်တော်ညီတော်မဵား တြေႛဋ္ဌကြံရင်ဆိုင်နေုကရသော အခက်အခဲမဵားကိုလည်း နက်နက် ရြိငြ်းရြိငြ်းနားလည် သဘောပေၝက်ပၝေုကာင်း အသိပေးလ္တွောက်ထားပၝသည်။ အစိုးရဋ္ဌကီးမြးကဵင်းပမည့်စာမေးပြဲမဵားကို သပိတ်မြောက်နေစဉ်အတငြ်း ဒေသအသီးသီးတငြ် အရပ်သား အဖြဲႛအစည်းမဵားက ဋ္ဌကီးမြးကဵင်းပနေသော စာမေးပြဲမဵားကို ၀င်ရောက်ေူဖဆို၍ မိမိတိုႛအရည်အသြေး မဵားကို ရပ်တန်ႛမနေစေအောင်ူမငြ့်တင်ူခင်း၊ ဘာသိာံငြ့်လူမဵြိးအကဵြိး ပံ့ပိုးကူညီိုံင်မည့် ဘာသာစကား သင်တန်းမဵား၊ ကနြ်ူပတြာသင်တန်းမဵား၊ ဟောေူပာစည်းရုံးမဆြိုင်ရာသင်တန်းမဵား၊ သမထ ၀ိင်္ပံနာဆိုင်ရာသင်တန်းမဵား၊ စာပေဆြေးြေိံးစကားဝိုင်းမဵား စုပေၝင်ူးပလြုပ်ုကူခင်း၊ မိမိတိုႛဒေသ အသီးသီးရြိ လူဋ္ဌကီးလူငယ်မဵားအတကြ် အသိဉာဏ်ဖြံႛ္ဘဖြိးတိုးတက်စေိုိံင်မည့် သင်တန်းမဵားဖငြ့်လစ်ြသင်ုကားပေုးကူခင်ူးဖင့် ဘာသာ သာသနာ လူမဵြိးကောင်းကဵြိူးဖစ်စေမည့် လုပ်ငန်းရပ်မဵား၌ ပိုမိုပူးပေၝင်း လုပ်ဆောင်ုကပၝရန်ကိုလည်း ရိုသေစြာလ္တွောက်ထားပၝသည် အရငြ်ူမတ်မဵားဘုရား။ ။
Reactions: မိုးမခ (ရန်ကုန်) -ူပည်တငြ်းရေးရာ သတင်းတိုထြာ
ူပည်တငြ်းရေးရာ သတင်းတိုထြာမိုးမခ (ရန်ကုန်)ိုံဝင်ဘာ ၂၉၊ ၂၀၀၇ ရန်ကုန်တိုင်း ရဲဝန်ထမ်းမဵား နေရာေူပာင်းရြေႚရန်ကုန်တိုင်း ထြေ၊အုပ် မြး ဦးလစြိုး စစ်ဗိုလ်ခဵပ်ြမဵားရဲႚ မဵက်ြိာံသာပေူးခင်း ခံနေရအရင်ြဉာဏိသရ တရားခေမြဵားနဲႚ စစ်အစိုးရရဲႚ တုန်ႚူပန်မဆြရာတော် ဦးဉာဏိသရ နဲႚ ပတ်သက်ူပီး မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၂ ရဲႚ သတင်ူးဖည့်စက်ြခဵက် -စက်တင်ဘာ အလနြ် စာပေစိစစ်ရေးရဲႚ ကဗဵြိာိံပ်ကပ်ြမမြဵား ရန်ကုန်တိုင်း ရဲဝန်ထမ်းမဵား နေရာေူပာင်းရြေႚ ရန်ကုန်၊ိုိံဝင်ဘာ ၂၇ - ရန်ကုန်တိုင်းအတငြ်ူးမြိႚနယ်မဵားက ရဲဝန်ထမ်း အတော်မဵားမဵားကို နေရာအေူပာင်းအရြေႚ လုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ အတည်မူပရြသေးတဲ့ သတင်းတပုဒ် ထက်ြနေပၝတယ်။ အရေအတကြ် အတိအကဵ မသိရသေးပေမယ့် ရဲဝန်ထမ်းအခဵြိႚေူပာင်းမိန်ႚမဵား လက်ခံရရြိူပီူးပီ လိုႚ ရဲဝန်ထမ်းတဦးက ဆိုပၝတယ်။ ရန်ကုန်တိုင်းအတငြ်းကူမြိႚနယ်ခဵင်းသာ ရြေႚေူပာင်ူးခင်ူးဖစ်ပေမယ့်၊ အခဵြိႚကို နယ်တေအြထိေူပာင်းပစ်မယ်လိုႚ ရဲအသိုင်းအ၀ိုင်းမြာေူပာနေုကပၝတယ်။ စက်တင်ဘာလ သံဃာတော်မဵား နဲႚ လူထုဆိံ္ဋူပပြဲမဵားအူပီးမြာ ရဲအရာရြိမဵားနဲႚ ရဲသားမဵားကို စစ်အစိုးရက ရည်ရယ်ြခဵက်ရြိရြိနဲႚ ခြဲထုတ်ပစ်တာလိုႚ ယူဆသူမဵားလည်း ရြိနေပၝတယ်။ ရန်ကုန်တိုင်း ထြေ၊အုပ် မြး ဦးလစြိုး စစ်ဗိုလ်ခဵပ်ြမဵားရဲႚ မဵက်ြိာံသာပေူးခင်း ခံနေရ ရန်ကုန်၊ိုိံဝင်ဘာ ၂၇ - စက်တင်ဘာလအတငြ်း သံဃာတော်မဵားနဲႚူပည်သူမဵားရဲႚူငိမ်းခဵမ်းစြာ ဆိံ္ဋူပပြဲမဵားကြိုိံမ်ိံငြ်းရာမြာ သံဃာတော်မဵားကို စြဲခဵက်မဵြိးစုံတင်ခဲူ့ပီး၊ စစ်အစိုးရဖက်က လ္တွောက်လဲခဵက်တြေ ပေးခဲ့တဲ့ ရန်ကုန်တိုင်း အထေထြေ အုပ်ခဵပ်ြရေး ဦးစီးဌာနမြး ဦးလစြိုးကို စစ်ဗိုလ်ခဵပ်ြမဵားကေူမြာက်စားနေတယ်လိုႚ ထြေ၊အုပ် ၀န်ထမ်းအသိုင်းအ၀ိုင်းကေူပာဆိုနေုကပၝတယ်။ (ဗိုလ်မြုးကီးဟောင်း) လစြိုးဟာ ရန်ကုန်တိုင်း သံဃာနာယက ဆရာတော်ုကီးမဵားကို သံဃာမဵား အကဵင့်ပဵက်ူပားပုံ နဲႚ ဆူပူအောင် လပ်ြဆော်ပုံမဵားကို စြဲခဵက်တင် လ္တွောက်ထားပုံမဵားကိုိုံင်ငံပိုင် ရုပ်ူမင်သုံကား အစီအစဉ်မဵားကလည်း လငြ့်ထုတ်ပေးခဲု့ကပၝတယ်။ ဦးလစြိုးဟာ ကုလအထူးကိုယ်စားလယြ် ဂန်ဘာရီ ခရီးစဉ်အတက်ြလည်း တာဝန်ယူ စီစဉ်ခဲ့သူ တဦးလည်ူးဖစ်ပၝတယ်။ သံဃာတော်မဵားကို သိက္ခာခဵ၊ အူပစ်ဖိုႚမမြဵား ကဵြးလနြ်ိုံင်သောေုကာင့် ဗိုလ်ခဵပ်ြမဵား အုကားမြာ ရေပန်းစားလပြေမယ့် ရဟန်းငယ်မဵားနဲႛူပည်သူမဵားအုကားမြာူပင်ူးပင်းထန်ထန် ဝေဖန်ူပစ်တင် ဆဲဆို ခံနေရသူလည်ူးဖစ်နေပၝတယ်။ ထြေ၊ အုပ် ၀န်ထမ်း အခဵြိႚကတော့ ယခုတုကိမ်ိုံင်ငံဝန်ထမ်းထူးခဋ္ဋန်ဆု ဆတ်ြခူးသူမဵား စာရင်းမြာ ဦးလစြိုး ထိပ်ဆုံးက ပၝလိာိုံင်တယ်လိုႚ ဆိုနေုကပၝတယ်။ အရင်ြဉာဏိသရ တရားခေမြဵားနဲႚ စစ်အစိုးရရဲႚ တုန်ႚူပန်မြ ရန်ကုန်၊ိုံဝင်ဘာ ၂၇ - စက်တင်ဘာ အရေးအခင်းအူပီူးပည်သူမဵားအုကားမြာ အထူးရေပန်းစားနေတဲ့ သဲကုန်း သီတဂူ ဆရာတော် အရင်ြဉာဏိသရရဲႚ တရားခေမြဵားနဲႚ ပတ်သက်ူပီး စစ်အစိုးရကူမြိႚနယ် အေးခဵမ်းသာယာရေိးံငြ့် ဖြံႚူဖြိးရေး ကောင်စီမဵားက တဆင့် သူတိုႚသဘောထားကို ထုတ်ူပန်နေုကပၝတယ်။ ယခုသီတင်းပတ်အတငြ်း လမ်းမတော်ူမြိႚနယ် မ၊ယ၊က မြ ရ၊ယ၊က မဵားကို အစည်းအဝေးခေၞူပီး ဆရာတော်ရဲႛ အခေမြဵား ပဵံႚြိံႚနေတာကို သိရြိေုကာင်း၊ တရားခြေ နားထောင်မြေုကာင့်ူပည်သူမဵားကို ဖမ်းဆီးမြာ မဟုတ်ပေမယ့်၊ တရားခြေိံငြ့် ပတ်သက်ူပီိးိုံင်ငံတော်အုကီးအကဲမဵား အနေနဲႚ စိတ်မသက်မသာူဖစ်ရပၝေုကာင်း၊ူပည်သူမဵားအုကား ရ၊ယ၊က မဵားက သတင်ူးဖန်ႚပေးဖိုႚ ခေၞေူပာခဲ့တယ်လိုႚ အစည်းအဝေးတက်ခဲ့သူ တဦးက ဆိုပၝတယ်။ူပည်သူမဵားရဲႚ ဆင်းရဲမြဲတေမအြနေနဲႚ ခံစားခဵက်မဵားကို ကိုယ်စာူးပြ ဟောုကားပေးမမြဵားေုကာင့် လူုကိက်ြမဵားနေုကတဲ့ တရားခေမြဵား အုကားမြာ အရင်ြဉာဏိသရ အခေမြဵားလည်း ပၝ၀င်နေပၝတယ်။ဆရာတော် ဦးဉာဏိသရ နဲႚ ပတ်သက်ူပီး မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၂ ရဲႚ သတင်ူးဖည့်စက်ြခဵက် - ဘန်ကောက်၊ိုံဝင်ဘာ ၂၈ - ယခုအခဵိန်မြာ ဆရာတော်ဟာူပည်ပ ခရီးစဉ် ထက်ြရြိနေပၝတယ်။ ယခင်အပတ်က အဂဿလန်ကို ရောက်ရြိခဲူ့ပီး ဆရာ၊ တကာမဵားနဲႚ တြေႚဆုံခဲ့ပၝတယ်။ေူမာင်ူးမကေဵာင်းမြာ တည်းခိုခဲ့စဉ် ဆရာတော်အနေနဲႚ သာသနာ့မောဠိ ဆရာတော်မဵားနဲႚ ပတ်သက်ူပီးေူပာုကားခဲ့တာ ရြိမရြိကို မိုးမခက အတည်ူပြိုံင်အောင် စုံစမ်းနေပၝတယ်။ ကိုရီးယားကိုိုံဝင်ဘာ ၇ ရက်မြ ၁၆ ရက်အတငြ်း သြားခဲ့တယ်လိုႚ ခရီးစဉ်စာရင်း အရ သိရပၝတယ်။ ဒီဇင်ဘာ ၃၊ ၄ နဲႚ ၅ ရက်မဵားမြာူပလြုပ်မယ့် ထိုင်းဘုရင်ရဲႚ မြေးနေႚကို တက်ရောက်ဖိုႚ ဖိတ်ုကားခံရတဲ့ ဆရာတော်ုကီး ၉ ပၝးထဲမြာ ဆရာတော်လည်း ပၝတယ်လိုႚ ဆိုပၝတယ်။ ပၝကင်္စတန်မြာူပလြုပ်မယ့်ိုံင်ငံတကာဗုဒ္ဌဘာသာ ညီလာခုံကီးကိုမန်မာူပည်မြာ ကဵင်းပခဲ့စဉ်ကလို တာဝန်ပေးလာပၝကူပလြုပ်ပေးမြာူဖစ်ေုကာင်း ဆရာတော်က မိန်ႚုကားတယ် ဆိုတာကိုိုံဝင်ဘာူပည်တငြ်းထုတ် ဂဵာနယ်တေထြဲမြာ ဖော်ူပထားတာ တြေႚႛရပၝတယ်။ ပၝကင်္စတန်ိုံင်ငံရေး အေူခအနေပေၞ မူတည်တယ်လိုႚ ဆရာတော်က ဆိုတယ်လိုႚ ဂဵာနယ်သတင်းတေကြ ဖော်ူပပၝတယ်။ ထိုဂဵာနယ်မြာပဲ ဆရာတော်ုကီးကို စစ်တပ်က ထိန်းသိမ်းထားတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတြေ မမနြ်ေုကာင်း ဆရာတော့် ဂေၝပကတေကြေူဖရငြ်းထားတာကိုလည်း ဖော်ူပထားပၝတယ်။ ထိုင်ိးိုံင်ငံနယ်စပ်ကို တိမ်းရြောင်လာရတဲ့ ရဟန်းသံဃာတော်တြေ လုံခြံရေးနဲႚ သီတင်းသုံးနေထိုင်ခငြ့်မဵားနဲႚ ပတ်သက်ူပီး ဆရာတော်ုကီးက ထိုင်းဘုရင်နဲႚ တြေႚခဲ့ခဵိန်မြာ တစုံတခုေူပာခဲ့၊ မိန်ႚပေးခဲ့ရင် ကောင်းမယ်ဆိုပီး ထိုင်ိးိုံင်ငံရောက်ူမန်မာအလုပ်သမားတေကြ ထင်ူမင်ခဵက်ပေးနေပၝတယ်။ စက်တင်ဘာ အလနြ် စာပေစိစစ်ရေးရဲႚ ကဗဵြိာိံပ်ကပ်ြမမြဵား ရန်ကုန်၊ိုံဝင်ဘာ ၂၈ - စက်တင်ဘာအရေးအခင်း အူပီး စာပေစိစစ်ရေးက အူဖတ်အတောက်မဵား ပိုမို တင်ုးကပ်လာရာမြာ ကဗဵာ စာမဵက်ြိာံတေမြာ အုကမ်းတမ်းဆုံးလိုႚ စာပေ အသိုင်းအ၀ိုင်းက ဆိုနေုကပၝတယ်။ ကဗဵာ စာမဵက်ြိာံမဵား အူဖတ်အတောက်မဵားတာေုကာင့် မဂ္ဂဇင်းမဵားအနေနဲႚ စာပေစိစစ်ရေးကို စာမူမဵားတင်တဲ့အခၝ ကဗဵာ ပုဒ်ရေ အမဵားအူပား ထည့်တင်တာတောင် အလ္တွင်မမြီဘူးလိုႚ ဆိုကပၝတယ်။ ယခုထက်ြမယ့် Idea မဂ္ဂဇင်းရဲႚ ၂၀၀၇ ဒီဇင်ဘာလထုတ်မြာ ကဗဵာ အပုဒ်ရေ ၁၅ ပုဒ် တင်ူပခဲ့ပေမယ့် စိုင်းစိုင်းခမ်းလြိင်ရဲႚ ကဗဵာ တပုဒ်ကိုသာ စာပေစိစစ်ရေးက ဖော်ူပခငြ့် ပေးခဲ့ပၝတယ်။ ရယ်စရာ မဂ္ဂဇင်းကတော့ ၃၂ ပုဒ် တင်ူပရာမြာ ၄ ပုဒ်သာ ဖော်ူပခငြ့် ရခဲ့ေုကာင်း သိရပၝတယ်။
Reactions: ဖိုးသံ(လူထု) - ၉၂ မြေးမိခင်သိုႚ
အဲဒီညကလေ … အမေ …။မိုးလေးတွေက တဖွဲဖွဲကျလို့မသဲလှပေမယ့် အသည်းကတော့ ကျင်နေတယ်မခွဲချင်တာတော့ အမှန်ပါအရင်ဆုံးဖြတ်တာက တံခွန်တိုင်နောက် … အရာတော်တောင်မြင့်မှောင်နဲ့မည်းမည်းထဲမှာတနေရာပြီး တနေရာ ကျန်ရစ်ခဲ့တယ်စားချင်စိတ်လည်း မရှိအိပ်ချင်စိတ်လည်း မရှိစဉ်းစားချင်တာပဲ ရှိပေမယ့်ဘာမှစဉ်းစားလို့လည်း မပေါ်သြော် … မြစ်ငယ်တောင် ကျော်သွားပါပေါ့လား …။ အဖေနဲႚ အမေကို ကန်တော့ခဲ့ပါတယ်ညီနဲ့ အမ နှမငါ့ကို ခွင့်လွှတ်ကြနော်တကိုယ်ကောင်းဆန်တာ မဟုတ်သူရဲကောင်း ဖြစ်ချင်တာလည်း မဟုတ်အခြေအနေက တွန်းပို့တော့ဒို့မှာ ရွေးစရာ မရှိလို့သာနားလည်ကြပါကွာအဖေနဲ့ အမေကိုဂရုစိုက်ကြပါကွာ … လို့။အဲဒီနောက်တော့ အမေရယ်တောင်တွေ … တောတွေချောင်းတွေ … အင်းတွေလွှားကနဲ လွှားကနဲ … တသွားထဲသွားနယ်စွန်နယ်ဖျားထိကဗျာတပုဒ်တောင် ရေးမိသေးတယ်အမေမှတ်မိမယ် ထင်ပါတယ် ….“အနောက်ကို တချက်ငဲ့ကြည့်လို့အရှေ့ကိုတဲ့ ထွက်ခဲ့တယ်” ဆိုတာလေပြက္ခဒိန် စာမျက်နှာတွေသက်ရွက်ခြောက်တွေလိုတဝေေ၀ လွင့်ကျနီသူတွေဖြူ … ဖြူသူတွေနီဘ၀တွေ … ချစ်ခင်ရင်းနှီးသူတွေသွေကွဲရော … ရှင်ကွဲရောခွဲခွာကုန်ကြအသစ်တွေနဲ့လည်းတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပဲလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ကြဘာသာစကားတောင်အတော်စုံအောင် တတ်ခဲ့နှစ်ပေါင်းသုံးဆယ်ဆိုတာနည်းသမို့လား အမေရယ် …။အပါးမှာ အဖေလည်းမရှိကျနော်တို့လည်း မရှိအမေချည့် တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူး လှေခွက်ချည်း မဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေနဲ့ လက်တွဲလို့သားမြေးသစ်တွေနဲ့ လက်တွဲလို့ အမယ်အို့ ခြေလှမ်းမို့သူတို့လောက် မသွက်လည်း၁၉၃၆တုန်းကလိုပဲချီဆဲ တက်ဆဲအခုလည်း လက်တွန်းလှည်းနဲ့ရဲရဲကြီး ချီတက်နေတဲ့အမေ့ရဲ့သားမှာ ၁၃၀၀ရတီ*အမေဆိုတဲ့ စိန်နားကပ်ကြောင့်ပါးအပြောင်ကြီး ပြောင်ခဲ့ရပါတယ် …။အမေလည်း လှမ်းကျနော်လည်း လှမ်းဒီလမ်းကြီး တလျှောက်မှာမောတယ် တခွန်းမပြောပါဘူး၉၀ ကျော်ကြီး နှုတ်ကတခွန်းပဲ ထွက်ရှာတယ်ဘာအဓိပ္ပာယ်လဲကဗျာဖတ်သူ တွေးကြည့်ပါ“ငါ့သား ကျန်းမာအောင်နေအမေလည်း ကျန်းမာအောင်နေတယ်” တဲ့။ *၁၃၀၀ူပည်ႛမဵြိးဆက်ကို င်္ီနြ်းတာပၝ။
Reactions: ဒေၝက်တာလဏြ်းဆြေ - ၉၂ လူထု အမေသိုႚ
၉၂ နှစ်ပြည့် လူထုအမေသို့ အလွမ်းစာဒေါက်တာလွဏ်းဆွေနိုဝင်ဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၇ ‘အမေ နေကောင်းလား’ လို့ခရီးရောက်မဆိုက် ကျနော်တို့ ပြေးတွေ့တော့ခပ်နွေးနွေး ရင်ငွေ့ကကျနော်တို့ဆီ ပြန်ပြေးလာ‘ငါ့သားတို့ ဘယ်ရထားနဲ့ လာကြလဲကွဲ့ထိုင်ကြ … ထိုင်ကြ’ တဲ့နွေးထွေးတဲ့ အမေ့ နှုတ်ဆက်သံကြည်မွေ့တဲ့ အမေ့ အပြုံးကျနော်တို့ကို ဖုံးလွှမ်းခရီးပမ်းသမျှကျနော်တို့ လန်းဆန်းခဲ့ရပါတယ် အမေ …။ ‘ အမေ … ဒီမှာ ဆရာမြေဇာဒီမှာ ဆရာဝသုန်ဟိုဘက်ခုံမှာ ကိုအောင်ဝေးဒီဘေးက ကိုသာချိုဟိုဘက်က ကိုချစ်ဝင်းမောင်’ လို့ခပ်ရို့ရို့ ကျနော် မိတ်ဆက်တော့ …အမေက‘မြင်တာပေါ့ ငါ့သားအမေ့သားတွေ အားလုံးကိုအမေ အကုန်လုံး မြင်တာပေါ့’ ဆိုပြီးပြုံးပြုံးကြီး ကြည့်နေတဲ့အမေ့ရဲ့ပုံရိပ်ရင်ထဲကို ယိုဖိတ်စီးဆင်းအေးမြတဲ့ မြစ်တစင်းဖြစ်ခဲ့ရပါတယ် အမေ …။ ‘ငါ့သားတွေ အရက် သိပ်မသောက်ကြနဲ့နော်’‘အမေတို့ဘက်ကလူတွေ အသက်ရှည်တာကိုပဲ အမေမြင်ချင်တယ်’‘ကိုချစ်ဝင်းမောင်တို့၊ ကိုလွဏ်းဆွေတို့မဂ္ဂဇင်းတွေ အခြေအနေ ကောင်းကြရဲ့လားအမေ့စာမူတွေ အချိန်မီရကြရဲ့လားအမေလည်း ရေးဖြစ်တာဆိုလို့ကိုဝင်းငြိမ်းနဲ့ဆို ဒီသုံးအုပ်ပဲ ရှိတာငါ့သားတို့ အဆင်မပြေရင်အမေ့ကို စာမူခ မပေးနဲ့နော်’ လို့တိုးလျလျ အသံနဲ့စိုးရိမ်ပူပန်တဲ့ စကားအမေပြောကြားလေတော့ကျနော့်စိတ်ထဲပီတိတွေနဲ့ အားဖြစ်ခဲ့ရပါတယ် အမေ …။ ဦးပိန်တံတားပေါ် လမ်းလျှောက်ရင်းလေညင်းက ပြေးဝင်ဆောင့်တော့ကျနော့်စိတ်တွေ ခပ်မြောက်မြောက်ဖြစ်သွားအဲဒီ အကြောင်းတရားထဲမှာကျနော်လို အယ်ဒီတာ ငချွတ်ငတားလေးကိုအမေက စာမူတွေ ချီးမြှင့်ပြီးအသိအမှတ်ပြုခဲ့တာဟာအဓိက အကြောင်းတရားပါ အမေ …။ နှင်းမြူတွေ ဝေနေတဲ့တောင်သမန် နံနက်ခင်းမှာအမေ့မေတ္တာတွေကနှင်းမြူတွေနဲ့အတူ ရွာကျအယူအဆတူယုံကြည်ချက်တူရည်မှန်းချက်တူရင်ဘတ်ချင်းတူကြတဲ့အမေ့သား အမေ့သမီးတွေအားလုံးအပြုံးကိုယ်စီ ယှက်သန်းအလွမ်းကိုယ်စီ ပွေ့ထွေးအနာဂတ်ရေးအတွက် တိုင်ပင်တောင်သမန် တခွင်လုံးငြိမ်းချမ်းတဲ့ ရသတွေ ပြည့်ဖုံးပျော်လို့မဆုံး ပြုံးလို့မ၀ ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ် အမေ …။ အခုတော့အမေ့သား အမေ့သမီးတွေလည်းစစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ အကြမ်းဖက်မှုအောက်မှာတမလွန် ရောက်သူရောက်ဘ၀တက္ကသိုလ် ရောက်သူရောက်လွတ်မြောက်နယ်မြေ ရောက်သူရောက်တတိယနိုင်ငံ ရောက်သူရောက်ကမောက်ကမကစဉ့်ကလျားနဲ့ပြေးလွှားရုန်းကန်နေကြရပေမယ့်အမေ့ မေတ္တာထီးရိပ်ကကျနော့်တို့အပေါ်ထာဝရ အုပ်မိုးပေးထားလို့စိတ်ဓာတ်ခွန်အား မဖောက်မပြန်နဲ့ဖြောင့်မှန်တဲ့ လမ်းပေါ်မှာကျနော်တို့ ဆက်လျှောက်နေနိုင်တာပါ အမေ …။ အခုအခါမှာလွတ်မြောက်နယ်မြေရောက်အမေ့သား တယောက်အနေနဲ့‘အမေ နေကောင်းလား’ လို့ပြေးတွေ့ နှုတ်ဆက်ခွင့်မရတာသုံးနှစ်သုံးလီ ကြာခဲ့ပေမယ့်အမေဟာ ကျနော်နဲ့ မဝေးကျနော့်ရဲ့ အတွေး၊ ကျနော့်ရဲ့ဘေးမှာမြင့်မြတ်တဲ့ အဘိဓမ္မာမြင့်မြတ်တဲ့ မေတ္တာတရားမြင့်မြတ်တဲ့ စိတ်ဓာတ်ခွန်းအားတွေနဲ့ထာဝရ အနီးကပ်မတ်မတ်ရပ်နေဆဲလို့ယုံမြဲယုံကြည်လျက်ပါ အမေ …။ ။ အကိုးအကား - သူႚရဲႚ ဘလောက်က ယူပၝသည် ၊ http://drlunswe.blogspot.com
အမေနဲ့ သား (သို့) “သ”၀ဂ်ကထာ(အမေလူထုဒေါ်အမာ ၉၂နှစ်ပြည့် မွေးနေ့သို့ …)အောင်ဝေးနိုဝင်ဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၇ (၁)အမေ ကျနော့်ကို မတားနဲ့ကျနော် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အိမ် သွားမှ ဖြစ်မယ်။အမေ … အမေ့ကိုတော့ ကျနော် တားပါရစေအမေ တမလွန် ခရီးကို မသွားပါနဲ့ဦးကျနော်တို့ ဒီမိုကရက်တစ်နိုင်ငံတော်ဆီ သွားရဦးမယ် အမေ …။ (၂) အမေ ကျနော့်ကို မတားနဲ့ကျနော် နေပြည်တော်ကို သိမ်းမှ ဖြစ်မယ်။အမေ … အမေ့ကိုတော့ ကျနော် တားပါရစေအမေ … လူ့ဘ၀ကို မသိမ်းပါနဲ့ဦး ကျနော်တို့ သွေးစွန်းနေတဲ့ သင်္ကန်းတွေ သွေးစွန်းနေတဲ့ ဒေါင်းအလံတွေ သွေးစွန်းနေတဲ့ မျက်ရည်တွေ သိမ်းရဦးမယ် အမေ …။ (၃)အမေ ကျနော့်ကို မတားနဲ့ကျနော် စစ်အာဏာရှင်မှန်သမျှ သတ်မှဖြစ်မယ်။ အမေ … အမေ့ကိုတော့ ကျနော် တားပါရစေအမေ ပရိဒေ၀မီးတွေ မသတ်ပါနဲ့ဦးကျနော်တို့ အစိုးရအကြမ်းဖက်ဝါဒကို သတ်ရဦးမယ် အမေကျနော်တို့ အစိုးရ အကြမ်းဖက်ဝါဒကို သတ်ရဦးမယ် အမေ …။ ။ အမေ့သား-အောင်ဝေး၂၃-၁၀-၂၀၀၇(ခေတ္တ ပုန်းခိုကျင်း တနေရာ)
Reactions:ူမန်မာူပည်မြ အဆိုတော်မဵား ထိုင်ိးုိံင်ငံခဵင်းမိုင်္ဘမြိႛတငြ် ဖေဵာ်ေူဖတင်ဆက်
ူမန်မာူပည်မြ အဆိုတော်မဵား ထိုင်ိးုိံင်ငံခဵင်းမိုင်္ဘမြိႛတငြ် ဖေဵာ်ေူဖတင်ဆက်မိုးမခအထောက်တော် ၀၀၃ိုံဝင်ဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၇ ရန်ကုန်မြ နာမည်ကေဵာ်အဆိုရင်ြမဵာိးံငြ့် ခဵင်းမိုင်မြ ၀ၝသနာရင်ြလူငယ်မဵား၏ စင်တင်ဂီတပြဲ(ဓာတ်ပုံ- မိုးမခ)ူမန်မာူပည်မနြာမည်ဋ္ဌကီးအဆိုတော်အခဵြိႛပၝ၀င်သော တေးဂီတဖေဵာ်ေူဖပဲတြစ်ခုကို ထိုင်ိးုိံင်ငံ၊ ခဵင်းမိုင်(ဇင်းမယ်)္ဘမြိႛတငြ် ယနေႛညနေပိုင်းကူပလြုပ်ခဲ့သည်။ ဆုန်သင်းပၝရ်၊ ဇမ်ိူံး၊ အယ်လ်ဆိုင်းဇီ စသည့် နာမည်ရအဆိုတော် ၃ ဦိးံငြ့်အတူ ခဵင်းမိုင်္ဘမြိႛရောက်ူမန်မာူပည်သား ဂီတ၀ၝသနာရငြ် လူငယ်မဵား ပူးပေၝင်းတင်ဆက်ခဲူ့ခင်ူးဖစ်သည်။ တေးဂီတဖေဵာ်ေူဖပဲသြိုႛ ပရိသတ် ၃၀၀ ခန်ႛ တက်ရောက်အားပေးခဲ့္ဘပီး၊ ၄င်းတိုႛမြာ ခဵင်းမိုင်တငြ် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသောူမန်မာူပည်သားမဵာူးဖစ်သည်။ လက်မတ်ြတစ်စောင်လ္တွင် ဘတ် ၂၀၀ (၇ဒေၞလာခန်ႛ)ူဖင့် ၀ယ်ယူ၍ အားပေးခဲူ့ခင်ူးဖစ်သည်။ မနြ်ူပည်နယ်မြ အလုပ်သမားတစ်ဦးက - "သမီး ရြာူပန်ရောက်တဲ့အခၝ ဒီအဆိုတော်တေသြီခဵင်းဆိုတာ အနီးကပ်တြေႛခဲ့ဖူးတယ်လိုႛေူပာရင် ယုံကမြာ မဟုတ်ဘူး … " ဟု ၀မ်းသာအားရေူပာူပသည်။ ဋ္ဌကိတြင်ေုကညာထားသည့်အခဵိန်ထက် ၁ နာရီကေဵာ် နောက်ကဵ္ဘပီးမြ ဂီတပြဲ ကဵင်းပခဲူ့ခင်ူးဖစ်သော်လည်း ပရိသတ်မဵားက အေးဆေးတည်္ဘငိမ်စြာ အားပေးခဲု့ကသည်။ ဂုဏ်တော်ခဵီးမမြ်ူးခင်း စတိတ်႟ြိး - Gospel Songs Music Concert ဟု အမည် ပေးထားသော ဂီတပဲတြော်တငြ် အဆိုရင်ြမဵားက ခရစ်ယာန် ဘာသာရေး ဆိုင်ရာ တေးသီခဵင်းမဵာူးဖင့်သာ တင်ဆက်ခဲ့ေုကာင်း တြေႛရသည်။ ယခုပဲတြငြ် ပၝ၀င်ခဲ့သော နာမည်ရအဆိုရင်ြမဵားမြာူပည်ပမြ ခရစ်ယာန်အသင်းတော်မဵား၏ စီစဉ်မြူဖင့် စကဿာပူ၊ မလေးရြား၊ ထိုင်ိးုိံင်ငံ(ဖူးခက်္ဘမြိႛ) တိုႛတငြ် သြားရောက်သီဆို၊ မိတ်သဟာရဖြဲႛခဲ့ဖူးသည့် အတြေႛအဋ္ဌကြံရိသြူမဵာူးဖစ်ုကသည်။ အဆိုပၝ ဂီတပဲမြဵားတင်ြလည်ူးမန်မာူပည်သား ထောင်ိံငြ့်ခဵီ၍ စည်းကမ်းရိစြာ အားပေုးကည့်ရခြဲ့ေုကာင်း သိရသည်။ဆဲဆြောင်မရြိသြော ဇမ်ိူံး၊ နာမည်ကေဵာ် ဆုန်သင်းပၝရ်၊ ခဵစ်စဖယြ် အယ်လ်ဆိုင်းဇီ တိုႛက သက်ြလက်ူမြးရကစြာ တင်ဆက်ခဲု့ကသည်။ (ဓာတ်ပုံ- မိုးမခ)ပရိသတ်မဵားက ဂီတပဲတြော်ရောက် အဆိုရင်ြတိုႛ၏ မူရင်း ဗီစြီဒီ၊ ဒီဗီဒြီ သီခဵင်းဓာတ်ူပားမဵားကို အားပေးဝယ်ယူခဲု့ကသည်။ (ဓာတ်ပုံ- မိုးမခ)
Reactions: လိုည်းြေိံြေိာံင်း - ခဵစ်သော အမေ့အတကြ် အလမြ်းစာ
ခဵစ်သော အမေ့အတကြ် အလမြ်းစာလိုည်းြေိံြေိာံင်ိးိုံဝင်ဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၇ အမေဟာ …ဂုဏ်ပကာသန၊ မာန်မာန မရြိပကတိူဖစြင်တဲ့ ရေအြတ္ဘိပီးသေိာံလြုံးသာိးံငြ့်ပင်လယ်ရေူပင်ပမာ ထာဝရ စီးဆင်းနေဆဲပၝ။အမေဟာ …အမေ့ရဲႛဘ၀ကို ကိံ္ဇာရ အူဖစ် ဋ္ဌကံႛဋ္ဌကံႛခံရင်းသမီးတိုႛ မောင်ိံမြတတေကြို အိုအေစစ်ူဖစ်စေခဲ့တာပၝ အမေ။ အမေဟာ …တိုင်ူးပည်ရဲ.္ဘငိမ်းခဵမ်ူးခင်းအတက်ြအေူဖမန်ြကို ရြာဖေကြာ ထောက်ူပအသက်စနြ်ႛရမြာကို နည်းနည်းလေးမြ မေုကာက်ခဲ့သူပၝ အမေ။ အမေဟာ …ဘာဝနာတရားကို ပြားမဵား္ဘပီးအမေ့ရဲ. သားသမီးတေအြတက်ြအမေ့ရဲ. တိုင်ူးပည်အတက်ြဘ၀တေကြို ပေးဆပ်စာတြေ၊ ကဗဵာတေကြို ရင်ိံငြ့်သီဖြဲႛူပည့်သူတေရြဲႛဆိံ္ဋကို ရာစုတစ်ခုကာူဖည့်ဆည်းခဲ့တာေုကာင့်အမေ့ရဲ. မေတ္ဇာအလင်းကနေတစ်စင်းပမာ …အမေ့ရဲ. ကရုဏာတရားကလမင်း ပမာ …အြိံင်းမဲ့ သ္ဘာမဲ သာနေလဵက်ပၝ အမေ။ အမေဟာ …ကဗဵာတေရြေး စာတေရြေးသား သမီးတေရြဲႛ စူံပဘယ်အရိာံငြ့်မြိံင်းမရတဲ့မိခင်ရငြ်ုကည်တဲိံ့လြုံးသားမြာုကည်လင်တဲ့ အ္ဘပြံးမဵားနဲႛသာ ဖြဲႛတည်ထာိးိုံင်လနြ်းသူပၝ။ အမေဟာ …စစ်အာဏာရငြ် တသက်ဘက်ပေၝင်းစုံ ခန်ြအားတြေ စိုက်ထုတ်ခဲ့သူမိုႛအမေ့အတကြ် ဂုဏ်ူပမြတ်ြတမ်း(ကောင်းကင် လငြ်ူပင် တ၀မြ်းမြာ)ရောင်စုံပန်းတြေ လန်းလန်ူးဖာခဲ့ပၝ္ဘပီ အမေ။ အမေဟာ …သေိံ္ဌမန်ြစြာ ပေၝက်ဖြားလာခဲ့တဲ့ အမဵြိးသမီးကောင်းမလ္တွော့သောဇြဲိံငြ့် တိုက်ပြဲဆင်စိန်ခေၞမြ အထောင်အသောင်းကို ရင်ဆိုင်တရားမ္တွတ္ဘငိမ်းခဵမ်းသောလမ်းစဉ်ကို အသေအခဵာကိုင်စြဲနောင်လာမယ့် မဵြိးဆက်သစ်တိုႛအတကြ် စံနမူနာကောင်းကို ရဲရဲူပခဲ့သူပၝ။ အမေ …လူထု အမေ …ဘေးမသီ၊ ရန်မခ အိံ္ဇရာယ် အပေၝင်းမြ ကင်းရငြ်း္ဘပီးအသက်ရာကေဵာ် ရည်ြစေေုကာင်း(သမီးတိုႛ မောင်ိံမြတတြေ အားလုံးက) ဆုတောင်းလိုက်ပၝရစေ အမေ။ ။ အမေလူထုဒေၞအမာ သက်တော်ရာကေဵာ်ရည်ြပၝစေ။ လိုည်းြေိံြေိာံင်း ၂၀၀၆ ခိုံစြ်ိုံဝင်ဘာလ ၂၉ ရက် သိုႚ - Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to Facebook
Reactions: လူထုအတကြ် လူထုဖက်က လူထုဒေၞအမာ - ၁
လူထုအတကြ် လူထုဖက်က လူထုဒေၞအမာ - ၁၀င်းတင့်ထနြ်ိးိုံဝင်ဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၇ ( ၁ ) ကဵနော်ဟာ အညာသာူးဖစ်ပေမဲ့ မိံ္ဇလေးထက် ရန်ကုန်ကိုပဲ ပိုပီး ကဵမြ်းကဵမြ်းကဵင်ကဵင်သြားတတ်လာတတ် ရြိခဲ့ပၝတယ်၊၊ ဘ၀မြာ အနေဋ္ဌကာခဲ့ရတာကလဲ ရန်ကုန်မြာ မဟုတ်လား၊၊ ဟိုတုန်းက မြေးရပ်ဌာနေ ရေဘြိုေူမဆီူပန်တိုင်း မိံ္ဇလေးမြာပဲ ရက်တော်တော်ဋ္ဌကာဋ္ဌကာ ၀င်တတ် နားတတ် ရောက်တတ်ခဲ့တာ အခၝခၝပေမယ့်၊ ၀င်းတေနြဲႚ့ တည်ထားတဲ့ မိံ္ဇလေးနေူပည်ကို ရန်ကုန်လောက် မကဋ္ဋမ်းကဵင်ခဲ့တာကတော့ အမန်ြပၝ ၊၊ ဒၝပေမဲ့ အညာသြေး ဗမာသြေးကပဲ စကားေူပာလို့ လား၊ ကုန်းဘောင်သြေးကပဲ စကားေူပာလို့ လား၊ ဘာလိုႛ လဲတော့ မသိပၝ ၊၊ မိံ္ဇလေးကို ခဵစ်ခဲ့တာကတော့ ငယ်ငယ်ကတည်းက ပၝ၊၊ "မန်း ရတနာပုံနေူပည် …" ဆိုတဲ့ အသံလေးနဲ့ စလိုက်တဲ့ သီခဵင်းသံကို ဋ္ဌကားရရင် ငယ်ငယ်ကတည်းက ဘာရယ်မသိ လမြ်းတတ်ခဲ့ဖူးပီး၊ - " - -ေူခတော် အသရေလဵမြ်း ..ူပည်တော်ရေမြန်း ... ငၝးစောင်လေ သိုက်ကဵမ်း … စိုက်နန်းရယ် တည်တော်မူ … ဆိုတဲ့ ခန့် ခန့် ညားညားစာသားစကားပိုဒ်တြေ ပၝ၀င်တဲ့ အောင်မဂဿလာ - နဲ့ အစခဵီ လိုက်တဲ့ အောင်မဂဿလာ သီခဵင်းဋ္ဌကီး သီခဵင်းခံ့သံဋ္ဌကီးကို ဋ္ဌကားလိုက်ရလေတိုင်းလဲ ရင်ထဲ တလပ်ြလပြ် ခံစားခဲ့ရဖူးပၝတယ်၊၊ "ကော်ရော်သံ - ကော်ရော်သံ … ဆင်ပန်းလက်စုံမိုးတယ် … မဵြိးလေးပၝး -ရာရာကေဵာ် … သက်တော်ရည်ြစေဋ္ဌေကာင်းငယ် … တောင်းဆုခေဋ္ဋ … "ဆိုတဲ့ ဆုတောင်း မေတ္ဇာပိုႛသသံ အပိုဒ်နဲ့ အတူ " - - ဘုံဝေယံ … နိုင်ငူံပည်သူ … အေးစေ ဗိုလ်လူ … " ဆိုတဲ့ အပိုဒ်ကတော့ ရင်ထဲမြာ အူမဲလိုလို လြိငြ်းခတ်နေတတ် ခဲ့ပၝတယ်၊၊ ကဵနော်ငယ်ငယ်လေးက ကဵနော်တိုႚ အိမ်အိုလေးရဲႚ့ ထရံစုတ်လေးပေၞမြာ အမေမတ်ြမတ်ြရရ၀ယ်လာ ခဵိတ်ဆြဲထားတဲ့ "မန်းရာူပည်"့ူပက္ခဒိန်လေးပေၞက မိံ္ဇလေးနန်ူးမြိႚ့ရိုးနဲႚ့ ကဵြံးရိပ်ရေူပင်ညြိ့ညြိ့ မိံ္ဇလေး အမတ်ြအသား၊ မိံ္ဇလေးပန်းခဵီကားလေးကိုလည်း အဲဒီတုန်းကတည်းက ခဏခဏ ငေးဋ္ဌကည့်မိရင်း အိပ်မက်ထဲအထိ မဋ္ဌကာမဋ္ဌကာ မက်တတ်ခဲ့ဖူးပၝတယ်၊၊ ကဵနော် မတ်ြမိသမဵြ ကဵနော့်အမေလယ်သူမဋ္ဌကီးရဲ့ တသက်တာမြာ လေးဆူဓာတ်ပုံ၊ ရေတြိဂုံ စေတီတော်ူမတ်ဋ္ဌကီးပုံတခဵပ်နဲႚ့ မဟာူမတ်မုနိဘုရားဋ္ဌကီး ပုံတော်တခဵပ်ူပီးရင်၊ူပက္ခဒိန်အူဖစ် ၀ယ်ဖူးတာဆိုလိုႚ အဲဒီ မိံ္ဇလေးရာူပည့် အထိမ်းအမတြ် - မိံ္ဇလေးနန်ူးမြိ့ ရိုးနဲ့ ကဵြံးရေူပင်ညြိ့ ညြိ့ ပၝူပက္ခဒိန်တခုပဲ ၀ယ်ခဲ့ဖူးပၝတယ်၊၊ အမေခမဵာာ တော်တော်ကို ဋ္ဌကိက်ြလနြ်းလလြို့ ဝယ်ခဲ့တာူဖစ်သလို၊ ကဵနော့်ဘ၀မြာလဲ ပထမဆုံး အိမ်မြာ စူမင်ဖူး၊ စြဲလန်ိးံစ်ြသက်ဖူးတဲ့ ပန်းခဵီကားဟာ၊ အဲဒီမိံ္ဇလေးနန်ူးမြိ့ ရိုးပုံ ပန်းခဵီကားလေးပဲူဖစ်ခဲ့ပၝတယ်၊၊ ငယ်ငယ်တုန်းက ရောင်စုံခဲတံဗူးလေး စရတော့၊ ကိုယ့်ဟာကိုယ် မဋ္ဌကာမဋ္ဌကာ လိုက်လိုက်ူပီး ကူးယူ ဆြဲဋ္ဌကည့်ခဲ့ဖူးတာဟာလဲ အဲဒီူပက္ခဒိန်ပေၞက မိံ္ဇလေးနန်ူးမြိ့ ရိုး ပန်းခဵီကားလေးပၝပဲ၊၊ ကဵနော် ပထမဆုံး မိံ္ဇလေးကို စရောက်တော့၊ နန်းရြေႚဖက် ရောက်အောင်သြာူးပီး၊ ငယ်ငယ်တုန်းကတည်းက အင်မတန်ိံစ်ြသက်ခဲ့ဖူးတဲ့ မန်းရာူပည့်ူပက္ခဒိန်ပေၞမြာပၝခဲ့တဲ့ ပန်းခဵီကားထဲက ရခြင်းလေးနဲႚတူမယ့်နေရာ သေခဵာရြေူးပီး တမေ့တမော ထိုင်ဋ္ဌကည့်ခဲ့ဖူးပၝတယ်၊၊ မိံ္ဇလေးဟာ ရေဘြိုနဲႚ ဘာမမြဝေးလပြေမဲ့၊ မိံ္ဇလေးကို ငယ်ငယ်ကတည်းက စြဲစြဲလန်းလန်းရြိခဲ့ပေမဲ့၊ ဘ၀ အေူခအနေအရ ကဵနော့်ရဲႚ လူငယ်ဘ၀ိံစ်ြပေၝင်းမဵားစြာဟာ မိံ္ဇလေးကိုကေဵာ်ူပီး ရန်ကုန်မြာ သြားဋ္ဌကီူးပင်းခဲ့ရပၝတယ်၊၊ အဋ္ဌေကာင်းဋ္ဌေကာင်းဋ္ဌေကာင့် မိံ္ဇလေးကို ရောက်ူဖစ်ရင်လဲ တပတ်ဆယ်ရက် ဆယ့်ငၝးရက်တေထြက် မပိုခဲ့ရသလိုဖစ်ခဲ့ရူပီး မခဵင့်မရဲ ခံစားခဲ့ရဖူးပၝတယ်၊၊ အဲဒီလို မခဵင့်မရဲ ခံစားခဲ့ရတဲ့ မိံ္ဇလေးကို ဋ္ဌကြံမယ့်ဋ္ဌကြံ ဆုံမယ့်ဆုံရတော့လဲ ၀ရမ်းေူပးဘ၀နဲႚပဲ ရက်ပေၝင်းမဵားစြာ လရညြ်ိံစ်ြပေၝက် ရင်ခဵင်းအပ် ပြေႛဖက်ြေိံးထြေးခဲ့ရပၝတော့တယ်၊၊ ရစ်ြလေးလုံးအရေးတော်ပုံဋ္ဌကီးအူပီး၊ အရေးတော်ပုံဋ္ဌကီးရဲႚ့ အကဵြိးဆက် နိုင်ငံရေးပၝတီတြေ အလဵြိအြလဵြိပြေၞထက်ြအူပီး၊ သိပ်တောင် မဵားမဵားစားစား မလပ်ြရြားလိုက်ရပၝဘူး၊ နိုင်ငံရေးနဲႚ့ပဲ ၀ရမ်းေူပးဘ၀ ထပ်ရောက်ရပၝတယ်၊၊ ဟိုဟိုဒီဒီကနေ နောက်ဆုံးမြာ မိံ္ဇလေးကို ရောက်လာရပၝတော့တယ်၊၊ ကေဵာင်းရိပ် ကန်ရိပ် သံဃာ့အရိပ်ပေၝင်းစုံမြာခိုရင်း၊ ရဲဘော်တကာ မိတ်ဆေတြကာရဲ့ူခံပေၝင်းမဵားစြာ အိမ်တကာမြာခိုရင်း၊ မိံ္ဇလေူးမြိႛရဲႛနေရာပေၝင်းစုံ လမ်းဋ္ဌကိလြမ်းဋ္ဌကား ခေဵာင်ဋ္ဌကားမကဵန် အြိံ့ ရောက်ရ ကဵင်လည်ရပၝတော့တယ်၊၊ လူက ၀ရမ်းေူပူးဖစ်တဲ့အူပင်၊ စက်ဘီူးမြိ့ တော်ဋ္ဌကီူးဖစ်တဲ့ မိံ္ဇလေူးမြိ့ ပေၞ မြာ စက်ဘီးမစီးတတ်တဲ့ကဵနော်ဟာေူမလေဵြာက်ဝိဇ္ဆာ တပိုင်ူးဖစ်ရပၝတော့တယ်၊၊ ဘယ်လောက်အထိတောင်ေူမလေဵြာက်ဝိဇ္ဆာူဖစ်နေရသလဲဆိုတော့၊ ယူဂဵီ တပိုင်းအူဖစ်နေနေရတဲ့ကာလတခဵြိ့ မြာ မိံ္ဇလေးက မိတ်ဆေရြဲဘော် တခဵြိ့ က အထူးသူဖင့် ဟာသဋ္ဌကယ်ြဋ္ဌကယ်ြလူငယ်တခဵြိ့ က ကဵနော့်ကယ်ြရာမြာ သူတိုႛ အခဵင်းခဵင်း လဵြိႛ၀က်ြနာမည်ပေး ခေၞနေဋ္ဌကတာက "ေူမလေဵြာက်ဝိဇ္ဆာဋ္ဌကီး" ဆိုတဲ့ အထိပၝပဲ၊၊ နောက်ပိုင်းကဵတော့ တခဵြိႛက " ၀ိဇ္ဆာ" ဋ္ဌကီးလိုႛ သူတိုႛဟာသူတိုႛ နာမည်ေူပာင်ပေူးပီး လဵြိႛ၀က်ြခေၞဆိုနေဋ္ဌကရာကနေ၊ "ပထမံဋ္ဌကီး"လိုႛေူပာင်းလဲ ခေၞဝေၞတဲ့သူတေလြည်း ရြိခဲ့ရတဲ့အထိပၝပဲ၊၊ လူကလဲ ဟိုနေရာရောက်လိုက် ဒီနေရာရောက်လိုက်နဲႛ မိံ္ဇလေးအြိံ့ေူခစဋ္ဌကာူဖန်ႚနေခဲ့ရပၝတော့တယ်၊၊ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလဲ အညာသာူးဖစ်တဲ့အူပင် အသားအရောင်ကလဲ ဋ္ဌေကးနီရောင်မက ဋ္ဌေကးညြိ ဋ္ဌေကးမည်းရောင် ပေၝက်နေတော့၊ လယ်ြအိတ်တလုံး ပခုံးပေၞလယြ်ူပီး လမ်းတကာပေၞ ကုန်းဋ္ဌေကာင်းလေဵြာက်နေတဲ့ ကဵနော့်ကိုမင်ရသူ၊ မသိဋ္ဌကသူအပေၝင်းကတော့၊ ဘယ်က တောသား-ူမြိ့ တက် စေဵးလာဝယ်သလဲလို့ ပဲူမင်ဋ္ဌကလိမ့်မယ် ထင်ပၝတယ်၊၊ အဲဒီလို တောင်ရောက်လိုက်ေူမာက်ရောက်လိုက်နဲႛ မိံ္ဇလေး ရြေူမြိႛတော်ဋ္ဌကီးရဲႛိံလြုံးသား တည့်တည့်ပေၞ မဋ္ဌကာမဋ္ဌကာ သြားလာ လညြ့်လည်နေတတ်တဲ့ ကဵနော်ဟာ မိံ္ဇလေူးမြိ့ ဋ္ဌကီးရဲႛ အထင်ကရနေရာ ၈၄ လမ်းမဋ္ဌကီးပေၞကိုလဲ အဋ္ဌကိမ်ဋ္ဌကိမ်ူဖတ်သန်းခဲ့ရဖူးပၝတယ်၊၊ ၈၄ လမ်းမဋ္ဌကီးပေၞရောက်ရလိုႚ "လူထု" တိုက်ရြေ့ က မဋ္ဌကာခဏူဖတ်သန်းသြားရလေတိုင်း ဖဵတ်ကနဲ ရင်ခုန်တတ်လေ့ ရြိပၝတယ်၊၊ ဒီအနီးအနားဝန်းကဵင်မြာ အူမဲလိုလို ထောက်လမြ်းရေး သူလဵြိ ဒလံတြေ ခဵထားတတ်တယ်- လို့ေူပာဋ္ဌကဆိုဋ္ဌက သတိပေးဋ္ဌကဖူးတဲ့ လုပ်ဖေၞကိုင်ဖက် မိတ်ဆေအြပေၝင်းအသင်းတေရြဲ့ စကားသံတေကြိုပန်ူပန်ဋ္ဌကားမိ သတိရမိနေတာဋ္ဌေကာင့်တော့ မဟုတ်ပၝ၊၊ လူထုတိုက် ( အင်တာနက် ၀ီကီ ပေၞကရတယ်) "လူထု" ဆိုတဲ့ စာလုံးလေိးံစ်ြလုံးနဲ့ ရေးထိုးထားတဲ့ ကမ္တည်းဆိုင်းဘုတ်လေးဟာ ဆိုင်းဘုတ်အနေနဲ့ ကတော့ ဘာမြ ဋ္ဌကီးဋ္ဌကီးကဵယ်ကဵယ် ခမ်းခမ်းနားနားမရြိပၝ၊၊ ဒုတိယူမြိ့ တော်ဋ္ဌကီူးဖစ်နေတဲ့ မိံ္ဇလေူးမြိ့ ဋ္ဌကီးပေၞမြာဧရာမ ဆိုင်းဘုတ်ဋ္ဌကီးတြေ နေရာအြိံ့ ရြိပၝတယ်၊၊ ထိုးမုန့် ဆိုင်တခုရဲ့ နာမည်ဆိုင်းဘုတ်၊ လဖက်ရည်ဆိုင်တခု၊ လယ်ြအိတ်ဆိုင်တခုရဲ့ အမည်ဆိုင်းဘုတ်လောက်တောင် ဋ္ဌကီးဋ္ဌကီးမားမား ထည်ထည်ဝၝ၀ၝ ဟိတ်နဲ့ ဟန်နဲႚ နေရာယူထားတာ မရြိပေမဲ့၊ တူခားတူခားသော ဆိုင်းဘုတ်ဋ္ဌကီးတေနြဲ့ ယဉ်ြလိုက်ရင် ဆိုင်းဘုတ်လေးဟာ ခပ်သေးသေးပၝပဲလိုႚတောင်ေူပာရမြာူဖစ်ပေမဲ့၊ "လူထု" ဆိုတဲ့ စာလုံးလေိးံစ်ြလုံးဟာ ထူးထူးခာူးခားသက်ဝင်လပ်ြရြားနေပၝတယ်၊၊ "လူ" ဆိုတဲ့ ပထမစာလုံးလေးကိုက "လ"နဲ့ တဆက်တည်ိးံစ်ြခေဵာင်းငင်ဟာ တခေဵာင်းနဲ့ တခေဵာင်း-ခြဲမနေဘဲ၊ ခပ်သော့သော့လက်ရေးအသငြ် တဆက်တည်းဆက်နေပၝတယ်၊၊ "ထု" ဆိုတဲ့ စာလုံးလေးက နောက်ဆုံးတခေဵာင်းငင်လေးကလဲ လြိငြ်းတနြ့် လေးလို ကြေးတက်သြာူးပီး ရိုးရိုးလေးနဲ့ ထူးထူးခာူးခာူးဖစ်နေရင်း လူနဲႛ အတူ ဟန်ခဵက်ညီ အခဵြိးကဵနေတယ် ထင်မိတယ်၊၊ ဒၝကိုက လူထုတိုက် ရဲ့ လူထုအထိမ်းအမတြ် "လူထု" လိုဂို၊ "လူထု" မူပိုင်၊ ထရိတ်မတ်လေးသဖယြ် လူထုဋ္ဌကားမြာ အသားကဵနေခဲ့တိာံစ်ြပေၝင်းနည်းနည်းနောနောမဟုတ်တော့၊၊ "လူထု" ဆိုတဲ့ စာလုံးလေးက ရိုးရိုးလေးနဲႛ အားပၝနေသလို၊ "လူထု" ဆိုတဲ့ စာလုံးလေိးံစ်ြလုံးကို ဆက်ူပီး ထက်ြပေၞလာခဲ့တဲ့ ဗမာဝေၝဟာရ၊ "လူထု" ဆိုတဲ့ ဝေၝဟာရရဲႛ အနက်အဓိပဍ္ဎၝယ်ကလဲ ရိုးရိုးလေးနဲႛ အားမာန်ူပည့်နေရုံမက ကဵယ်ကဵယ်ူပန်ႛူပန်ႛ လေးလေးနက်နက်နဲႛ အေူခခံကဵကဵ အိံစ်ြသာရသဘောကို ဖေၞညနြ်းနေပၝတယ်၊၊ "လူထု"ဆိုတာ အေူခခံအကဵဆုံးသော အကဵယ်ူပန်ႛဆုံးသော အမဵားတကာ့ အမဵားစုဋ္ဌကီူးဖစ်သောူပည်သူပည်သားအားလုံးကို ကိုယ်စာူးပထြားတဲ့ ဝေၝဟာရမဟုတ်လား၊၊ ကနေ့ ကာလမြာတော့ "လူထု" ဆိုတဲ့ဝေၝဟာရဟာ ရေပန်းအစားဆုံးဝေၝဟာရတခုဖစ်နေတာ ဋ္ဌကာပၝူပီ၊၊ "လူထုသဘောထား" "လူထုစစ်တမ်းကောက်ယူခဵက်" "လူထု တိုက်ပြဲ" "လူထုခေၝင်းဆောင်" "လူထုထောက်ခံမြ" "လူထု ဆိံ္ဋ"၊၊ "လူထု"တိုက် နားကူဖတ်သန်းသြားရလေတိုင်း၊ "လူထု" ဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်လေးဆီ လမြ်းဋ္ဌကည့်မိလဵက်သာူးဖစ်တတ်ခဲူ့ပီး၊ နိုင်ငံရေးဝရမ်းေူပးတယောက်ဘ၀ပေမိုႚ့ တခၝမြ မ၀င်ူဖစ်အောင် သတိထားရြောင်ကငြ်းခဲ့ရပေမဲ့၊ အဲဒီနားကူဖတ်သန်းရတိုင်း ရင်ခုန်မိတတ်တာတော့ မတ်ြမတ်ြထင်ထင်ပၝပဲ၊၊ ဒီ "လူထု"ဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်လေးနဲႚ "လူထု" ဆိုတဲ့ တိုက်အိမ်လေးထဲမြာ အမေလူထုဒေၞအမာ ရြိနေလိမ့်မယ်၊ အမေဒေၞအမာဟာ လူထုဒေၞအမာဆိုတဲ့အတိုင်း လူထု ရပ်တည်ခဵက်နဲ့ လူထုဖက်က လူထုအတကြ် စာပေတေကြို အိုဋ္ဌကီးအိုမ ပေမယ့်၊ ကလောင်မခဵ တက်တက်ဋ္ဌကဋ္ဌြကြ ရေးသားဖေၞကဵြးနေလိမ့်မယ် - ဆိုတာတေကြို မနြ်းမေဵြာ် တြေးဆဋ္ဌကည့်မိရင်း စိတ်ထဲကနေ ဂၝရ၀ူပမြိခဲ့တာကလဲ အဋ္ဌကိမ်ဋ္ဌကိမ်ပၝ ပဲ၊၊ ကဵနော်တိုႛကိုယ်တိုင် နိုင်ငံရေးစာပေတေကြို အသည်းအသန် ဖတ်ရစြ အရယ်ြက လူထုတိုက်ထုတ် စာအုပ်စာပေတေကြို ဖတ်ရခြဲ့ရတာ နဲႛ၊ အမေလူထုဒေၞအမာရဲ့ဘ၀ခဵင်းမတူသည့် တရုတ်ူပည်၊ အို -ယန်းကီးတို့ ၊ ငြေ နဲ့ လက်နက် တို့ အပၝအ၀င် လူထုဦးလြ ရဲ့ လြောင်ခဵိငြ့်တငြ်းက ငက်ြငယ်မဵား၊ အားလုံးကောင်းဋ္ဌကရဲ့ လား၊ သတင်းစာမဵားကေူပာသော သမိုင်း စတဲ့ စာအုပ်တေအြဋ္ဌေကာင်း ဖဵတ်ကနဲဖဵတ်ကနဲ သတိရမိတတ်ပၝတယ်၊၊ လူထု ဦးလြ ( အင်တာနက် ၀ီကီ ပေၞကရတယ်) ( ၂ ) ကဵနော်တို့ဗမာူပည်စာပေသမိုင်းမြာ အလေးထားရမယ့် စံတင်လောက်တဲ့ အမဵြိးသမီးကလောင်ရငြ် တြေ ခေတ်အလိုက် ခေတ်အလိုက် ထက်ြပေၞခဲ့ဖူးပၝတယ်၊၊ ပဒေသရာဇ်ခေတ်တေလြောက်ဆီကို ခဏထား၊ အနီးခေတ် ကာလလောက်အထိပဲ ခြဲကန့် ဋ္ဌကည့်မယ်ဆိုရင် - ဒေၞ ဒဂုန်ခင်ခင်လေး၊ ဂဵာနယ်ကေဵာ် မမလေး၊ ဒေၞခင်မဵြိးခဵစ်၊ ဒေၞခင်ိံငြ်းယု နဲ့ အမေလူထုဒေၞအမာ တို့ ကို အားကောင်းမောင်းသန်တကယ့်ကလောင်ရငြ် ဋ္ဌကီးတြေ အူဖစ် တြေ့ ရပၝလိမ့်မယ်၊၊ ဗမာစာပေအိုံပညာလောကမြာ မတ်ြတိုင်ကိုယ်စီ စိုက်ထူထားနိုင်ဋ္ဌကူပီးသား၊ အိုံပညာ အရည်အသြေူးပည့် ကလောင်ရင်ြဋ္ဌကီးတြေူဖစ်သလို၊ ဒေၞဒဂုန်ခင်ခင်လေး၊ ဂဵာနယ်ကေဵာ် မမလေးနဲႛ အမေလူထုဒေၞအမာ တို့ ဟာ - သတင်းစာနဲ့ ပၝ ပတ်သက်နေဋ္ဌကတဲ့ ရြားရြားပၝးပၝး အမဵြိးသမီး သတင်းစာပညာရင်ြဋ္ဌကီး တေလြည်ူးဖစ်ခဲ့ဋ္ဌကပၝတယ်၊၊ ဒေၞဒဂုန်ခင်ခင်လေးက ယုဝတီဂဵာနယ်နဲႚ ယုဝတီသတင်းစာကို ဦးစီးထုတ်ဝေခဲ့သူ၊ အမဵြိးသမီး ကလောင်ရင်ြတေကြို ယုဝတီကလောင်ရင်ြဘြဲ့ ပေူးပီး အမဵြိးသမီးကလောင်ရင်ြမဵားအဖြဲ့ ကို တည်ထောင်ခဲ့သူဖစ်သလို၊ ဂဵာနယ်ကေဵာ် မမလေး ဆိုတာကလဲ ခင်ပနြ်းသည် ဂဵာနယ်ကေဵာ်ဦးခဵစ်မောင် ကယ်ြလနြ်ူပီးကတည်းက ဂဵာနယ်ကေဵာ်နဲ့ူပည်သူ့ ဟစ်တိုင် နေ့ စဉ်သတင်းစာတေကြို မိန်းမသားတန်မယ့် နေ့ စဉ်အပတ်စဉ် မပဵက် ဦးစီးထုတ်ဝေခဲ့သူဖစ်ပၝတယ်၊၊ ကဵနော်တိုႚတေရြဲ့ အမေ အမေလူထုဒေၞအမာဆိုတာကတော့ အားလုံးသိဋ္ဌကတဲ့အတိုင်းပၝပဲ၊၊ လူထုဂဵာနယ် နဲ့ လူထုသတင်းစာ တို့ ရဲ့ ဖခင်ဟာ လူထုဦးလြူဖစ်ခဲူ့ပီး၊ လူထုဂဵာနယ် နဲ့ လူထုသတင်းစာတိုႚရဲႚ မိခင်ရင်းအစစ်ဟာ လူထုဒေၞအမာ ပေပဲပေၝ့ ၊၊ ခင်ပနြ်းသည် လူထုဦးလြ တယောက် ဖဆဆိုရယ်ြတေရြဲႚ ယုတ်မာမနြဲႚ နရသိန်ထဲ ထောင်ထဲ ဋ္ဌကရြောက်စူံမန်းနေရစဉ် ကာလတလေဵာက်လုံးမြာလည်း အမေလူထုဒေၞအမာကပဲ အဆက်မူပတ်ဦးစီးထုတ်ဝေရြေႛဆောင်ခဲ့ရတယ် မဟုတ်လား၊၊ ဂဵာနယ်ကေဵာ်နဲႛူပည်သူႛဟစ်တိုင်ဟာ ဗမာူပည် စာနယ်ဇင်း သမိုင်းမြာသာမက ဗမာူပည်နိုင်ငံရေးလပ်ြရြားမသြမိုင်းမြာပၝ အရေးပၝတဲ့ မတ်ြတိုင်တြေ ရြိခဲ့သလို၊ လူထုဂဵာနယ်နဲႛ လူထုသတင်းစာ ဆိုတာဟာလဲ လူထုအတကြ် လူထုဖက်က ထနြ်းေူပာင်တဲ့သမိုင်းအစဉ်အလာတြေ တသီဋ္ဌကီးနဲ့ မဟုတ်လား၊၊ ဂဵာနယ်ကေဵာ်မမလေး ရဲႚ "ူပည်သူ့ ဟစ်တိုင်"ဟာ အာဏာရအုပ်စိုးသူ ဖေၝက်ူပန်သူ ဖဆဆိုရယ်ြမဵားရဲႛ ယုတ်ယုတ်မာမာ အဋ္ဌကမ်းဖက်ဝင်ရောက်ူပီး၊ စက်တေကြို ရဲဒင်းတြေ ပုဆိန်တေနြဲ့ ရိုက်ခဵြိး၊ ခဲစာလုံးနဲႛ စာစီခက်ြတေပြၝမကဵန် တူနဲ့ ထု မြောက်လနြ် ခေဵမြ ဖဵက်ဆီးပစ်တာ ခံခဲ့ရဖူးသလို၊ လူထုဦးလြ လူထုဒေၞအမာတို့ ရဲႛ လူထုဟာလဲ ဗုံးနဲ့ ခြဲတာတောင် ခံခဲ့ရဖူးပၝတယ်၊၊ ကနေ့ ခေတ်ကာလလို မဟုတ်ပဲ၊ လန်ြခဲ့တဲိံ့စ်ြပေၝင်းမဵားစြာကတည်းက နိုင်ငံတကာ့လပ်ြရြားမတြေအြတငြ်း အထိ တက်တက်ဋ္ဌကဋ္ဌြကပြၝ၀င်လပ်ြရြားခဲ့ဖူးတဲ့ ရြားရြားပၝးပၝး ဗမာအမဵြိးသမီးကလောင်ရင်ြတေအြူဖစ် ထူးထူးခာူးခား မတ်ြတမ်းတင်ထားရမြာကလဲ ဂဵာနယ်ကေဵာ်မမလေးနဲ့ လူထုဒေၞအမာပဲ ရြိမယ်ထင်ပၝတယ်၊၊ ဂဵာနယ်ကေဵာ်မမလေးဟာ ၁၉၅ဂခိုံစ်ြလောက်က ဂဵပန်နိုင်ငံမြာကဵင်းပခဲ့တဲ့၊ အိုံမြ ဗုံးပိတ်ပင်ရေး၊ အိုံမဗြုံးမစမ်းသပ်ရေး၊ စစ်ဆန်ႚကဵင်ရေးညီလာခံကန်ြဖရင့်ဋ္ဌကီးသို့ ၊ ကမ္တာူ့ငိမ်းခဵမ်းရေးကန်ြဖရင့် -ူမန်မာနိုင်ငံမြ ကိုယ်စားလယ်ြတဦးအူဖစ် တက်ရောက်ခဲ့ဖူးပၝတယ်၊၊ အမေလူထုဒေၞအမာဟာလဲ ၁၉၅၃ ခိုံစ်ြက ဒိန်းမတ်နိုင်ငံမြာ ကဵင်းပခဲ့တဲ့ "ကမ္တာ့အမဵြိးသမီးမဵား ညီလာခံဋ္ဌကီး"ကိုမန်မာနိုင်ငံက အမဵြိးသမီးကိုယ်စားလယ်ြအူဖစ် ပၝ၀င်တက်ရောက်ခဲ့ဖူးသူဖစ်ပၝတယ်၊၊ ဆရာဋ္ဌကီး သခင်ကိုယ်တော်မြိငြ်းဦးဆောင်တဲ့ ကမ္တာူ့ငိမ်းခဵမ်းရေးလပ်ြရြားမြ ၊ူပည်တငြ်ူးငိမ်းခဵမ်းရေးလပ်ြရြားမတြေ အတငြ်းတက်တက်ဋ္ဌကဋ္ဌြကြ ပၝ၀င်ခဲ့ဋ္ဌကတဲ့ ရြားရြားပၝးပၝး အမဵြိးသမီး ကလောင်ရင်ြတေထြဲမြာ ဂဵာနယ်ကေဵာ်မမလေးနဲႛ အမေ လူထုဒေၞအမာတို့ ဟာ ရြေ့ တန်းအခန်းက ပၝခဲ့ဖူးသူတြေူဖစ်ပၝတယ်၊၊ အနီးခေတ် ဗမာူပည် နိုင်ငံရေးလပ်ြရြားမသြမိုင်းတလေဵာက်မြာ၊ အမန်ြတရားဘက်ကနေ ရပ်တည် လပ်ြရြားခဲ့ဋ္ဌကတဲ့၊ သမိုင်းတာဝန်ကေဵပန်ြခဲ့ဋ္ဌကတဲ့၊ ထက်ူမက်တဲ့ ကလောင်တေလြည်း အဆက်မူပတ်လိုလို ပေၞပေၝက်ခဲ့ပၝတယ်၊၊ ကဵနော့်တဦးခဵင်း ခံစားနားလည်မအြရေူပာရရင်၊ နိုင်ငံရေးအရပၝိုံးဋ္ဌကားတက်ဋ္ဌကတြဲ့ ကလောင်ရင်ြတေထြဲမြာ အမဵြိးသမီးတေထြက် အမဵြိးသားကလောင်ရင်ြတေကြ ပိုပီးမဵားပၝတယ်၊၊ အဲဒီလို နိုင်ငံရေးအရပၝ တိုးတက်တဲ့၊ိုိံးဋ္ဌကားထက်ူမက်တဲ့ ရြားရြားပၝးပၝးအမဵြိးသမီးကလောင်ရင်ြတေထြဲမြာတော့ - ကဵနော့်အူမင်မြာ အမေလူထုဒေၞအမာဟာ ရြေ့ ဆုံးကူဖစ်တယ်လို့ဆိုလိုက်ခဵင်ပၝတယ်၊၊ အမေလူထုဒေၞအမာဟာ အားကဵစရာကောင်းလောက်အောင် စာစုံရေးနိုင်ခဲ့တဲ့ ကလောင်ရင်ြလဲူဖစ်ပၝတယ်၊၊ ဘာသာူပန်တေရြော ပင်ကိုယ်ရေးတေပြၝ ၊ ရသရော သုတပၝ၊ နိုင်ငံရေးရော လူမရြေးတေပြၝ၊ အမဵြိးဘာသာ၊ သာသနာအရေး တေရြော၊ အိုံပညာယဉ်ကေဵးမြ အမေအြိံစ်ြတေပြၝ၊ ဘာဆို ဘာမြ မလပ်ရအောင် ဒေၝင့်စုံအောင် စာစုံရေးနိုင်ခဲ့တဲ့ တကယ့်ကလောင်ရင်ြဆိုတာ စစ်မန်ြတဲ့ဗမာူပည်စာပေအိုံပညာသမားတိုင်း သိပၝတယ်၊၊ စာပေအိုံပညာ ၀မ်းစာကလဲ ကုံလုံဋ္ဌကယ်ြဝသူဆိုတော့၊ ဆေးစက်ကဵရာ အရုပ်ထင်စေနိုင်တဲ့ တကယ့်ပန်းခဵီကေဵာ်တဦးလို၊ူမင်ူမင်သမဵြ ဋ္ဌကားဋ္ဌကားသမဵြ ၊ စိတ်ဝင်စားဖယြ်ူဖစ်အောင် ရေူးပနိုင်စမြ်းရြိတဲ့ စာပေအိုံပညာရင်ြလဲူဖစ်ပၝတယ်၊၊ ဘာတြေ ရေးရေး၊ ရည်ရယ်ြခဵက်နဲ့ စေတနာ -အတိုင်းသားပၝနေတာကတော့ အမေလူထုဒေၞအမာ ရဲ့ စာပေလက်ရာတေတြိုင်းပေၞမြာ ပၝပဲ၊၊ အမေလူထုဒေၞအမာဟာ မိံ္ဇလေးသူ ပၝ၊၊ မိံ္ဇလေး ဆိုတာ ကုန်းဘောင် ၁၁ ဆက်ရဲ့၁၀ ဆက်ေူမာက်မင်း၊ မင်းတုန်းမင်းဋ္ဌကီး တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ ရတနာပုံမင်းနေူပည်ူမြိ့ တော်ဋ္ဌကီူးဖစ်သလို၊ နောက်ဆုံးမင်းဆက် သားတော် သီပေၝမင်းလက်ထက်မြာ ထီးကဵြိးစည်ပေၝက် သူ့ ကဵန်ြဘ၀ရောက်ခဲ့ရူပီး ကုန်းဘောင်ခေတ်ရဲ့ နေ၀င်ခဵိန်မြာ ဗမာဘုရင်ခေတ်ရဲ့ နောက်ဆုံးထီးစိုက်နန်းစိုက်ခဲ့ရာူမြိ့ တော်ဋ္ဌကီးလဲူဖစ်ခဲ့ပၝတယ်၊၊ ကုန်းဘောင်ခေတ်ရဲ့ နောက်ဆုံး အမတ်ြအသားလို့ ဆိုပေမဲ့၊ ကိုယ့်ထီးကိုယ့်နန်း ကိုယ့်ဋ္ဌကငနြ်းရဲ့ူပယုဂ်၊ ရာဇ၀င်ရြိတဲ့ ရြေးဟောင်း ယဉ်ကေဵးမြ အမေအြိံစ်ြတေနြဲႛူပည့်ိံကြ် ထုံမနြ်းနေဆဲနေရာ၊ ဗမာအမဵြိးသားတေရြဲ့ ထင်ရြားတဲ့ အမဵြိးသားယဉ်ကေဵးမြ အမတ်ြလက္ခဏာသကေဿတ တခုလဲပဲူဖစ်ခဲ့ပၝတယ်၊၊ မိံ္ဇလေးဟာ ထင်ရြားတဲ့ ကိုယ့်မူ ကိုယ့်ဌာန် ကိုယ့်သ္ပာန်နဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဟန်ရြိတဲူ့မြိႛတော်ဋ္ဌကီးတခုလဲပဲ မဟုတ်လား၊၊ စကားမြာတောင် ခဵိသြာယဉ်ကေဵးတဲ့အခေၞအဝေၞအသုံးအိံနြ်းတေနြဲႛ "မန်းစကား" ဆိုတာ ထူးခားတဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဟန် ရြိတယ်မဟုတ်လား၊၊ ဆရာစမြ်း (ဆရာမောင်စမြ်းရည် ) ကတော့ - မိံ္ဇလေးသူဖစ်တဲ့ အမေလူထုဒေၞအမာ ရဲ့ ရေးဟန်ကို " မန်းသံ အူပည့်နဲ့အသုံးထူးအလကဿာတြေ ဝေေ၀ဆာဆာနဲ့ူဗန်ူးဗန်းကြဲ ရေးလေ့ ရြိတယ်" လို့မတ်ြခဵက်ူပြ ဖေၞူပခဲ့ဖူးပၝတယ်၊၊ ဟုတ်ပၝတယ် ၊၊ အမေလူထုဒေၞအမာရဲ့ ရေးဟန်ဟာ မန်းသံ မန်းဟန်အူပည့်နဲ့ တကယ့်ကို ထူးထူးခာူးခား ကိုယ်ပိုင်ဟန်ရြိတဲ့ ရေးဟန်ပၝ ၊၊ မိံ္ဇလေးဟာ ဗမာဘုရင်ခေတ်ရဲ့ နောက်ဆုံးနန်းစိုက်ခဲ့ရာ မင်းနေူပည်ူမြိႛတော်ဋ္ဌကီးတခုဖစ်ခဲ့လေတော့၊ တခဵြိ့ ကတော့ - "မန်းဟန်" "မန်းသံ" ဆိုတာ "နန်းဆန်"တာ - လို့ ပဲူမင်ခဵင်ူမင်ဋ္ဌကနိုင်ပၝတယ်၊၊ အမေလူထုဒေၞအမာရဲ့မန်းသံ မန်းဟန်ကတော့၊ ကဵနော့်အူမင်မြာ အင်မတန်ကို "လူထုဆန်" ပၝတယ်၊၊ လူထုဋ္ဌကားမြာ လူထုတြေ နေ့ စဉ်သုံးစြဲေူပာဆိုနေဋ္ဌကတဲ့ လူထုသုံးစကားတေနြဲ့ ပဲ ဝေေ၀ဆာဆာူဖစ်အောင် ပေၞပေၞလင်ြလငြ်ူဖစ်အောင် ရေးသားဖေၞကဵြူးပလေ့ရြိပၝတယ်၊၊ လူထုဋ္ဌကား ခိုင်ြးိံငြ်းေူပာဆိုသုံးစြဲနေဋ္ဌကတဲ့ေူပာထုံးဆိုထုံးလေးတြေ၊ စကားပုံလေးတြေ၊ ဆိုရိုးစကားလေးတြေ၊ ဒေသိယလေလေးတြေ၊ လူထုအလကဿာလေးတေကြတော့၊ သူ့ နေရာနဲ့ သူ ၊ "ဂငြ် ကို ကဵ" လို့ ပေၝ့ ၊၊ တမင်ဟန်လုပ်ူပီး ရေးထားတာမဟုတ်ပဲ၊ ရင်ထဲကလာတဲ့အသံနဲ့ ရေးထားတဲ့ အမေရဲ့ လက်ရာတေဟြာ၊ အမေ ၀မ်းစာဘယ်လောက်ရြိတယ် ဆိုတာ၊ ဝေၝဟာရတြေ ဘယ်လောက်ဋ္ဌကယ်ြတယ် ဆိုတာ၊ အမဵြိးသားယဉ်ကေဵးမအြိံစ်ြသာရနဲ့ ဘယ်လောက်တသားတည်ူးဖစ်နေသလဲ ဆိုတာ လစ်ြကနဲ လစ်ြကနဲ ထင်ဟပ်ူပနေသလိုပၝပဲ၊၊ အမေလူထုဒေၞအမာဟာ စာပေနယ်မြာ သူကိုယ်တိုင် အင်မတန်အရိပ်အာဝၝသဋ္ဌကီးတဲ့ စာပေပင်ရိပ်ဋ္ဌကီး တပင်ူဖစ်နေပေမယ့်၊ နောက်ထပ် နောက်ထပ်သော စာပေပင်ရိပ်ပဵြိ ပင်ရိပ်ငယ်လေးတေရြဲ့ အဆက်မူပတ် ဖြံႚူဖြိးဋ္ဌကီးထြား တိုးတက်လာရေးကိုလဲ ဂရုတစိုက် အရေးတယူ ဖေးကူ လမ်ူးပ သန်ြသင်တတ်လေ့ရြိတာ သတိထားမိပၝတယ်၊၊ သူႚေူမးအရယ်ြလောက်ပဲ ရြိမယ့်၊ "ခေဵာအိမာန်"ဆိုတဲ့ မိံ္ဇလေးသူ ကလောင်ရင်ြမလေးရဲႚ "ကောင်းကင်အနမ်း" ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကလေးအတကြ် အမြာစကား ရေးသားခဵီူးမငြ့်ပေးရာမြာ၊ အမေလူထုဒေၞအမာက - "အမေလေဵြာက်ခဲ့တဲ့ လမ်းကို ခေတ်လူငယ်တယောက်အနေနဲႛ လေဵြာက်ဖော်ရတဲ့ အတကြ် အမေ အရမ်းဝမ်းသာတယ်၊၊ စာက စေတနာနဲ့ မဵားမဵားရေးလေ ကောင်းလေလေပဲ၊ ဟန်လုပ်ူပီးရေးရင် မကောင်းတော့ဘူး၊၊ အမေ မြာခဵင်တာကတော့ … လူငယ်တြေ စာတေမြဵားမဵားဖတ်ူပီး၊ စာတြေ မဵားမဵား ရေးဋ္ဌကပၝလို့- -" တဲ့၊၊ လူငယ်တြေ စာတေမြဵားမဵားဖတ်ူပီး စာတေမြဵားမဵားရေးဋ္ဌကမြာကို လိုလိုလားလား ရြိလနြ်းလတြဲ့ အမေလူထုဒေၞအမာဟာ ကိုယ်တိုင်လဲ စာတြေ မဵားမဵား ဖတ်ူပီး၊ မဵားမဵားရေးနိင်ြခဲ့သူဖစ်ပၝတယ်၊၊ အမေရေးခဲ့တဲ့ စာတြေ နည်း ရော့သလား၊၊ လူထုဂဵာနယ် လူထုသတင်းစာ ပုံမန်ြထုတ်ဝေနေတုန်းကတည်းက ညနက်သန်ကောင်အထိ စာတေဖြတ်၊ ပရုဖ် တေပြၝ ဖတ်ရလနြ်းလို့ ၊ အသက်(၃၉)ိံစ်ြလောက်ကတည်းက မဵက်မနြ် စတပ်ခဲ့ရတဲ့အမေဟာ အိုဋ္ဌကီးအိုမ အရယ်ြအထိလဲ စာတေဖြတ် စာတေရြေးနေလိုက်တာ အားကဵစရာပၝပဲ၊၊ ကဵနော်တို့ က အမေလူထုဒေၞအမာကို သည့်ထက်သည် အသက်ရာကေဵာ်ရည်ြစေခဵင်ူပီး၊ လူထုအတကြ် လူထုဖက်က အမေ့စာတေကြို သည့်ထက်သည် မဵားနိုင်သမဵြ မဵားမဵားဋ္ဌကီး၊ မဵားလေ ကောင်းလေ ဖတ်ခဵင်ပေမဲ့၊ မတရား အာဏာယူထားတဲ့၊ လူထုက လုံးဝမဋ္ဌကည်ူဖတြဲ့ နအဖစစ်အစိုးရနဲ့ စစ်အစိုးရ ရဲ့ လက်ကိုင်ဒုတ်တြေ ၊ ကပ်ဖား ရပ်ဖား လူရမ်းကားတေကြတော့ အမေ့ကို မလိုမုန်းထား ရန်ူငြိးထားရင်း၊ အမေ့စာတေအြပေၞ မရစြိမ့်နိုင်ရုံမက တတ်နိုင်ရင် အမေ့ကိုမန်ူမန်သေစေခဵင်နေဋ္ဌကတဲ့အထိတောင် အကုသိုလ်ပြားနေဋ္ဌကတာကိုလဲ ဋ္ဌကားနေ သိနေရပၝတယ်၊၊ လန်ြခဲ့တဲ့ (၁၀)ိံစ်ြလောက် ၁၉၉၇ခိုံစ်ြလောက်တုန်းကလဲ၊ အသက်(ဂ၂)ိံစ်ြအရယ်ြမြာ ရာသီဥတုက ပူလောင်လနြ်းလို့မေူမြိ့ တက်နေရ ရြာတဲ့ အမေ့ကို၊ နအဖဖက်က သူတောင်းစားတေကြ "ဒေၞအမာ အိမ်မြာ ရြိသလား" လို့ သုံးဋ္ဌကိမ်လောက် ဖုန်းဆက်မေးရုံနဲ့ တောင် အားမရလို့အိမ်အထိတောင် လာူပီး၊ "ဒေၞအမာ သေတယ် ဋ္ဌကား လို့ -ဟုတ်သလား" လို့လာမေးခဲ့ဋ္ဌက ဆိုပဲ၊၊ အမရပူရ တောင်လေးလုံးကေဵာင်းက ဆရာတော် ဦးပညာ ဆီကိုလဲ "ဒေၞအမာ သေတယ် ဋ္ဌကားတယ်၊ ဟုတ်သလား ... "လိုႚ မေးတဲ့သူက လာမေးဋ္ဌကသေးတယ် ဆိုပဲ၊၊ အဲဒီတုန်းက အူဖစ်အပဵက်ကိုတော့၊ အမေလူထုဒေၞအမာကိုယ်တိုင် ပင်တိုင်ရေးနေတဲ့ "မိုး- ဂဵာနယ်" ကနေ "တုံးကေဵာ်မ" ဆိုပီူးပန်ရေူးပခဲ့ဖူးတာ ကဵနော်တို့ ဖတ်ရဖူးပၝတယ်၊၊ ဒၝဋ္ဌေကာင့် ၂၀၀၅ ခိုံစ်ြက အမေ့အသက် ၉၀ူပည့်အူဖစ် တောင်သမန်အင်းစောင်းက ကိုပညာရဲႚ တောင်လေးလုံးကေဵာင်းမြာ အခမ်းအနားပြဲ လုပ်ဋ္ဌကတဲ့အခၝ၊ အရင်က "လမင်းတရာ အူငိမ့်" ကို ခေၝင်းဆောင် က ခဲ့တဲ့ မဌေးဌေူးမင့် (ပန်တဵာ ဌေးဌေူးမင့်)က အမေ့ရဲ့ ရြေ့ မြောက်မြာပဲ ပထမဆုံး ဂုဏ်ူပအြဖငြ့်အူဖစ် နာမည်ကေဵာ် လေဘာတီရဲႚ "တုံးကေဵာ်မ" သီခဵင်းကို သီဆိုပီး ဂၝရ၀ူပြ ဖငြ့်လစ်ြပေးခဲ့တာကိုလဲ ဗြီစီဒီအူပားပေၞကနေတဆင့် ကဵနော်တို့ မတ်ြမတ်ြရရ ဋ္ဌကည့်လိုက်ရဖူးပၝတယ်၊၊ အမေက အတီးမပၝ အဆိုပိုင်ပိုင်နဲ့ သီဆိုပသြားတဲ့ မဌေးဌေူးမင့်ရဲ့ တုံးကေဵာ်မသီခဵင်းကို နားဆင်ရင်း လလြပြပဋ္ဌကီူးပြံး လို့ မဟုတ်လား၊၊ ဟော - မဋ္ဌကာသေးခင် တလောလောက်ကပဲ၊ မိံ္ဇလေးမြာ နအဖဖက်သားလူရမ်းကာိးံယ်ြဝင် မသမာအဖြဲ့ ဝင်တခဵြိ့ က အမေလူထုဒေၞအမာကို အောက်လမ်းနည်းတေနြဲႚ ဟိုလိုလို ဒီလိုလို စကားတင်းဆိုလာဋ္ဌကတဲ့အသံတြေ တကေဵာူ့ပန်ထက်ြပေၞလာတာ ဋ္ဌကားလိုက်ရူပန်ပၝတယ်၊၊ အမေ့ကလောင်ကို ရောင်ူခည်မထက်ြနိုင်အောင် အမြောင်ခဵ၊ ပိတ်ဋ္ဌက ပင်ဋ္ဌကဦးမလားတောင် မသိပၝဘူး၊၊ ဘာပဲူဖစ်ူဖစ် အမေကတော့ သတ္ဇိရြိရြိံလြုံးသြေးနဲ့တုံးကေဵာ်မ သီခဵင်းသံကို နားဆင်ရင်း လလြပြပဋ္ဌကီူးပြံးနေဦးမြာပၝ ပဲ၊၊ (ဆက်လက်ဖော်ူပပၝမည် - မိုးမခ)
Reactions: လူထုဒေၞအမာ ၉၂ မြေးနေႚ အမတ်ြတရပြဲ နယူးယောက်ူပည်နယ်၊ ကဋ္ဋဲဆည်ကန်တငြ်ူပလြုပ်အထိမ်းအမတြ် အင်တာနက်စာစောင်လည်ူးဖန်ႚခဵိမိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၂ိုံဝင်ဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၇ိုိံဝင်ဘာ ၂၄၊ ၂၀၀၇၊ စနေနေႚတငြ် ကဵင်းပူပီးစီးခဲ့သော ဆရာမုကီး လူထုဒေၞအမိာံငြ့်တကြ စစ်အာဏာရင်ြကို အညံ့မခံသောူမန်မာူပည်တငြ်းရြိ စာနယ်ဇင်း၊ အိုံပညာရင်ြမဵားကို ဂုဏ်ူပသြည့် ပြဲတငြ် သာသနာ့မောဠိ အဖြဲႚခဵပ်ြဆရာတော်မဵားက အားပေးခဵီူးမငြ့်ခဲု့ကသည်။ အင်ဒီယာနာူပည်နယ်၊ ဖိုႚ၀ိန်ူးမြိႚကူမန်မာမိသားစုမဵားကလည်း သြားရောက် အားပေးခဲု့ကသူဖင့် စည်ကားလသြည်ဟု ဆိုပၝသည်။ သည်နေရာကနေ "ဒုတိယအိမ် -ိုံင်ငံတကာ စာပေဆက်ဆံရေး အင်အားစု" က စီစဉ်သော အီး-စာအုပ်ကို ရယူ ဖတ်ရြိုံင်ပၝသည်။ (စာ့ကင်း - အမေရိကန်အခေၞ သူတိုႚအရပ်မြာ ဘတ်ဖဲလိုးအရပ်ူဖစ်ပၝသည်။ အညာလေသူံဖင့် ကဋ္ဋဲဆည်ကန်ဟု အာလုပ်ူပြ သတင်းရေးလိုက်ရပၝသည်)
Reactions:ူမန်မာူပည် ဒီမိုကရေစီရေး ကူညီမြ ရန်ပုံငြေ စေဵးရောင်းပြဲ ကနေဒၝ မြူမန်မာူပည် လတြ်ေူမာက်ရေးလပ်ြရြားမြ အဖြဲႚ ကဵင်းပ
ူမန်မာူပည် ဒီမိုကရေစီရေး ကူညီမြ ရန်ပုံငြေ စေဵးရောင်းပြဲကနေဒၝ မြူမန်မာူပည် လတြ်ေူမာက်ရေးလပ်ြရြားမြ အဖြဲႚ ကဵင်းပမိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၂ိုံဝင်ဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၇ိုိံဝင်ဘာ ၂၄၊ ၂၀၀၇၊ စနေနေႚတငြ်၊ ကနေဒၝိုံင်ငံ၊ ဗန်ကူးပၝူးမြိႚရောက်ူမန်မာမိသားစုမဵာိးံငြ့် Action Committee for Free Burma အဖြဲႚတိုႚ သည်ူမန်မာူပည်ရြိ အတိဒုက္ခရောက်နေသော ရဟန်းသံဃာမဵားကို ကူညီိုံင်ရေးအတကြ် ရန်ပုံငြေ မုန်ႚစေဵးတန်းဖငြ့် အလခြံခဲု့ကေုကာင်း သိရြိရသည်။ လူမဵြိးပေၝင်းစုံ၊ ဘာသာပေၝင်းစုံက မိသားစုမဵား ၀ိုင်းဝန်းတက်ရောက်ုကူပီး ကနေဒၝဒေၞလာ ၃၀၀၀ ဖိုး အလငြေ ရရြိခဲ့သည်။ ကောက်ခံရရြိသော အလငြေမြဵား အားလုံးကိုမန်မာူပည်တငြ်းရြိ ရဟန်းသံဃာတော်မဵားထံ အူမန်ရောက်ရြိစေရေးအတကြ် မိုးမခ စာနယ်ဇင်းအဖြဲႚက တာဝန်ခူံပီး လဒြၝန်းပေးရန် အသင်းတာဝန်ခံ ကိုစိုးဦးက မိုးမခသိုႚ အေုကာင်ုးကားထားပၝသည်။ စေဵးရောင်းပြဲ ဓာတ်ပုံမဵားကို အောက်ပၝအတိုင်ုးကည့်ရြိုံင်ပၝသည်။
Reactions: MoeMaKa presents Ludu Daw Ah Mar - 92 Year with 91 program by Tin Moe, Maung Swan Yi and Khin One
MoeMaKa presents Ludu Daw Ah Mar - 92 Year with 91 program by Tin Moe, Maung Swan Yi and Khin OneNovember 28, 2007
ကုသိုလ် ဓၝူးပတိုက်ခံရတဲ့ လတန်ဆောင်တိုင်ယာတောကသာေူဗာ၂၀၀၇ခိုံစြ်၊ိုံဝင်ဘာ ၂၆ရက် ကိုဟိုဒင်းရေ- "သီတင်းကဋ္ဋတ်ပြဲတော်ဋ္ဌကီး္ဘပီးလိုႛ တန်ဆောင်မုန်းတန်ဆောင်တိုင် ဆီမီးကူမိငြ်၊ မသိုးအလြူမတ်သကဿန်းကပ်ဖိုႛ၊ ရေတြိဂုံ ကုန်းတော်ပေၞမြာူပိငြ် … " ဆိုတဲ့ ကဵနော်တိုႛငယ်ငယ်တုန်းက ဒီလိုအခဵိန်မြာုကားရလေ့ရြိတဲ့ ကိုမဋ္ဌကီးရဲႛ သီခဵင်းလေးကိုမတ်ြမိတယ် မဟုတ်လားဗဵာ။ ရန်ကုန်တန်ဆောင်တိုင်ပြဲတော်၊ လေးဆူဓာတ်ပုံ ရေတြိဂုံနဲႛ အလြူရေစက် လက်နဲႛမကြာ၊ ရက်ရောလတြဲ့ ဗုဒ္ဌဘာသာူမန်မာလူမဵြိးတြေ၊ ခြဲလိုႛရိုံင်ရိုးလားဗဵာ။ အခုတော့ ရေတြိဂုံကုန်းတော်ပေၞကို သံဃာတော်တေဟြာ ခငြ့်ူပခြဵက်လက်မတ်ြနဲႛ တက် ရသတဲ့၊ ဘုရားဖူုးကည်င်္ီိုသူတြေ လူစုလူဝေးနဲႛ မတက်ရဘူးတဲ့။ ကိုလိုနီခေတ်၊ ဂဵပန်ခေတ်ထက်ဆိုးတဲ့ ကာလတခုကို ရောက်နေ ပၝပေၝ့လားဗဵာ။ သံဃာတော်တေကြို ရိုက်ိံက်ြသတ်ူဖတ်၊ ဘုန်းဋ္ဌကီးကေဵာင်းတေကြနေ မောင်းထုတ်၊ူပန်ခိုင်း၊ သာသနာ့စောင်းထက် နအဖစောင်းက ပိုထက်တယ်လိုႛေူပာဖိုႛလုပ်နေတဲ့ကာလဋ္ဌကီးမြာ ကဵနော်ူဖင့်ဗမာူပည်က ကထိန အလပြဲတော်မဵားအတကြ် စိုးရိမ်ပူပန်မိတာ အမန်ြပၝပဲ။ ( Drawing - U Ba Kyi) ဒီကနေူပန်စဉ်းစားလိုက်တိုင်း ကထိန်ပြဲဋ္ဌကီးတ္ဘြေခိမ့်္ဘခိမ့်သဲကဵင်းပ္ဘပီး လမ်းတကာ၊ ရပ်တကာမြာ ကထိန်ညပ်ြဋ္ဌကီးတြေ အူပိင်ြအဆိုင်ဆင်ယင်၊ ခင်းကဵင်ုးက၊ ပြဲတေလြမ်းတြေ ကဵင်းပုက၊ ရန်ကုန်မြာဆိုရင် (ကာတနြ်း) ဦးဘဂဵမ်းလမ်းမြာ ကာတနြ်ူးပပြဲတေလြုပ်ုက၊ မိံ္ဇလေးဘက်မြာဆိုရင် စစ်ကိုင်းတောင် တောင် လုံးင်္ီတ်ြမ္တွ ကထိန်သြားခင်ုးက၊ စေဵးခဵိထြဲက အေရုံ၊ ဘီရုံ စတာဋ္ဌကီးတေကြ အ္ဘငိမ့်တေပြဲတေနြဲႛ နေႛခင်းဋ္ဌကီးဧည့်ခုံက၊ ဒီလိုခဵစ်စရာ၊ ဂုဏ်ယူစရာအစဉ်အလာလေးတေဟြာ နအဖစစ်အစိုးရရဲႛ စစ်မိန်ႛတြေေုကာင့် ပေဵာက်ကုန်တော့မြာပၝလားဗဵာ။ ကဵနော်တိုႛဗမိာိုံင်ငံသားမဵားဟာ ကိုယ့်မြာရြိရင် ကိုယ်ခဵည်းမစားသုံးပဲ သူမဵားကိုလည်းပေးကမ်းဝေမ္တွခဵင်တယ်ဆိုတဲ့ စိတ် စေတသိက်လေးရြိနေတော့ စပၝးသိမ်း၊ ပဲသိမ်း္ဘပီးရင် လြူုကတန်ုးကတာဟိာံစ်ြထောင်နဲႛတောင်ရြ္ဘိပီနဲႛ တူပၝတယ်ဗဵာ။ ဘယ်သူကမြ ရိုက်ခိုင်းဖိုႛမလို၊ အမိန်ႛပေးခိုင်းဖိုႛမလိုတဲ့ အစဉ်အလာကောင်းပၝ။ မင်းမြ စိုးမြ လုပ်တာမဟုတ်ပၝဘူး၊ ဆင်းရဲသားလဲ တတ်ိုံင်ရင် တတ်ိုံင်သလောက်လြူုကတမ်ုးကတဲိုံ့င်ငံနဲႛိုံင်ငံသားတေပြၝဗဵာ။ အခုတော့ လြူခဵင်လိုႛမလြူရ၊ လြူခဵင်သူကိုမလြူရ၊ ၀ဋ်ဒုက္ခတမဵြိးလိုပၝပဲ။ ဒီုကားထဲမြာ နအဖအစိုးရရဲႛ ၀ၝဒူဖန်ႛယိံ္ဇရားမဵားနဲႛ နောက်လိုက်ခြေး မီဒီယာမဵားထဲမြာ သူတိုႛလက်ပၝးစေ ဋ္ဌကံ့ဖတ်ြတေကြ ဘုန်းဋ္ဌကီးကေဵာင်းတေကြိုသြား္ဘပီး ကထိန်ပင်္စည်းတေအြတင်းလက်ခံခိုင်း၊ အတင်းရေစက်ခဵ၊ အတင်းကထိန်လိုက်ခင်းနေုကတယ်လိုႛုကားရတော့ ပ္ဘိုပီးစိတ်မခဵမ်းမသာူဖစ်ရတယ်။ အေးဓာူးပတိုက်တယ်ဆိုတာနဲႛေူပာင်ူးပန် ကုသိုလ်ဓာူးပတိုက်တယ်လိုႛ ဆိုရမလား မသိပၝဘူး။ တခဵြိႛသံဃာတော်မဵားကတော့ ပတ္ဇနိက္ကဇ္ဆြနကံဆောင်ထားတာမိုႛ သူတိုႛပေးတဲ့အခၝ လက်ခံထားလိုက်ပေမဲ့ သူတိုႛသြားတဲ့နောက် ကိုယ်တိုင်မသုံးပဲ သူမဵားကိုစနြ်ႛဋ္ဌကဲလိုက်ုကတယ်လိုႛလဲုကားရတယ်။ နအဖေုကာင့်မိုႛ သံဃာတော်မဵား လုပ်နေရပုံအတက်ြလည်း စိတ်မကောင်ူးဖစ်ရတယ်။ ကဵနော်တိုႛ ဗုဒ္ဌဘာသာမြာ အလြူဒၝနူဖစ်ေူမာက်ဖိုႛအတကြ် အခဵက်သုံးခဵက်လိုအပ်တယ်ဆိုတာ ခင်ဗဵားမတ်ြမိတယ်မဟုတ် လား။ အဲဒၝတေကြ လြူတဲ့သူရယ်၊ လြူတဲ့ပင်္စည်းရယ်၊ အလြူခံတဲ့လူရယ်လိုႛ ဆိုသမိုႛလား။ အခုတော့ သံဃာတော်မဵားကလက်မခံခဵင် တာကို အာဏာနဲႛအတင်းယူခိုင်းနေတယ်ဆိုတော့ အလြူဒၝနူဖစ်ေူမာက်ဖိုႛအတကြ် လိုအပ်တာဟာ စစ်တပ်အာဏာအပၝ အခဵက်လေးခဵက်ူဖစ်သြား္ဘပီပေၝ့ဗဵာ။ မူလသုံးခဵက်နဲႛတင် မရတော့တာလည်းအမန်ြပဲ။ စစ်အာဏာပိုင်တေကြခငြ့်မူပလြိုႛ မခင်းရတဲ့ ကထိန်တြေ၊ မကဵင်းပရတဲ့အလြူပြဲတြေ နည်းမမြနည်းတော့ပဲ။ ဗုဒ္ဌဘာသာေူပာေူပာရရင် ဒၝနမေူမာက်အောင်ြေိာံင့်ယက်ြဖဵက်ဆီး တယ်ဆိုတဲ့ အူပစ်ဟာ ဘယ်လောက်ဋ္ဌကီးသလဲ စစ်ဗိုလ်ခဵပ်ြတြေ စဉ်းစားမိရဲႛလားမသိဘူး။ ဒီစာကိုရေးနေရင်းပဲ ကိုဟိုဒင်းရေ၊ သတင်းတခုဝင်လာသဗဵ။ ကောင်းသတင်းေူပာရမလား၊ ဆိုးသတင်းေူပာရမလားမသိဘူး။ ခင်ဗဵားမိုႛ မ္တွရအုန်းမယ်။ အဲဒၝ (ဦး)ူမတ်ခိုင်ရဲႛလ္တွပ်တစ်ူပက်ဂဵာနယ်ပိတ်လိုက်ရ္ဘပီတဲ့ဗဵ။ ထုတ်ဝေခငြ့်ပိတ်လိုက်တာလိုႛ ဆိုတာပဲ။ ဘာေုကာင့်လဲဆိုတာတော့ မသိရသေးဘူး။ူပန်ုကားရေးဝန်ဋ္ဌကီး (ဗိုလ်ကေဵာ်ဆန်း)ကို ပိုင်လတြယ်ဆိုတဲ့လူ၊ သူလည်းကမ်းနားသစ် ပင်ပဲကိုး။ ကိုယ့်ကိုယ်အမြီကောင်းရြိ၊ အကာအကယ်ြကောင်းရြိတယ်ဆ္ဘိုပီး သူတကာကိုတယြ်၊ စာပေအိုံပညာသည်တေကြို တပည့် မြေး၊ ရန်သူထား လုပ်ခဵင်သလိုလုပ်နေတဲ့လူရယ်လေဗဵာ။ နအဖကိုယ်စား တရားမ၀င်ဝၝဒူဖန်ႛတာ၊ တိုက်ခိုက်တာတေလြည်း လုပ်မြ လုပ်။ လ္တွပ်တစ်ူပက်ဆိုတာက ဗမာူပည်ရဲႛ နံပတ်ဝမ်းအ၀ၝရောင်စာနယ်ဇင်းရယ်လိုႛ ဆိုင်းဘုတ်ခဵိတ်ဆြဲမထားယုံတမယ် နာမည်ဋ္ဌကီးပုဂ္ဂိလ်ြတေရြဲႛ "အတငြ်းရေး"ဆိုတဲ့ ကောလာဟာလတေကြို ဘုံးဘောလအော၊ ရက်ရက်ရောရာဋ္ဌကီးဖော်ူပနေတဲ့ ဂဵာနယ်ပၝကလားဗဵာ။ သူနဲႛမတည့်လိုႛကတော့ ရုပ်ရင်ြလောကသားတြေ၊ ဂီတလောကသားတြေ သြားပေရော့ပဲ။ တယ်လဲေူပာင်ေူမာက်ဆိုကိုးဗဵ။ အရင်လတုန်းက ကဵနော့်စာထဲမြာ သူႛဂဵာနယ်ကနေိုံင်ငံရေးကဵားသေတေကြို နအဖရဲႛစီမံကိန်းနဲႛ အသက်သငြ်းလာတာကို ရေးလိုက်မိသေးတယ်မတ်ြတယ်။ ဦးအောင်ဋ္ဌကီး၊ သခင်တင်ူမ၊ ဦးခဵစ်လိင်ြတိုႛသုံးဦးကို ခမ်းခမ်းနားနားဋ္ဌကီး ပြဲထုတ်္ဘပီး အတိုက် အခံတေကြို တိုက်တာလေဗဵာ။ူပည်တငြ်းကိုံင်ငံရေးလောကနဲႛ စာပေလောကမြာကို တော်တော်ေူပာစရာူဖစ်ခဲ့တာပေၝ့။ အခုတော့ … သူမဵားပဵက်စီးတဲ့အတကြ် ၀မ်းသာတယ်လိုႛတော့မေူပာခဵင်ပၝဘူးဗဵာ။ ဒၝပေမဲ့ - "လ္တွပ်တစ်ူပက်ဘာေုကာင့် အပိတ်ခံ ရတာလဲ" ဆိုတာလို ကဵနော့်ခေၝင်းထဲမြာ မရငြ်းတာလေးတြေ ကဵန်နေခဲ့တဲ့အတက်ြပဲ အစာမေုကသလိုဖစ်နေတာပၝ။ သူက မင်းသမီးတယောက်အေုကာင်း ပုတ်ခတ် ရေးသားလိုႛ အဲဒီမင်းသမီးကုကပ်ေူပးအထိတက်တိုင်တာနဲႛ အပိတ်ခံရသလိုလိုတောု့ကားတာပဲ။ုကပ်ေူပးက အာဏာပိုင်မဵားက မင်းသမီးလေးကိုပိုစာနာသြားတာလည်ူးဖစ်ခဵင်ူဖစ်မြာပေၝ့ဗဵာ။ အလယြ် သာမာန် အရပ်သားေူပာေူပာရင်တော့ လည်လနြ်းတဲ့ဘိန်း ခေဵးသင့်တာပၝပဲ။ အခုလိုအခၝဋ္ဌကီးရက်ဋ္ဌကီးမြာ ဗမာူပည်သားတေအြဖိုႛ တရား သံဝေယူစရာူဖစ်တာပေၝ့လေ။ ဒၝလောက်ပဲဗဵာ။ ဘယာဘေး ကြာဝေုးကပၝစေ။
Reactions: သာသနာ့မောဠိ ဥက္ကဌဆရာတော် ဦးပညာဝံသုသ၀ၝဒပေးတရားတော်
သာသနာ့မောဠိ ဥက္ကဋ္ဌဆရာတော် ဦးပညာဝံသ၏သြ၀ါဒပေး တရားတော်နိုဝင်ဘာ တတ်ိယပတ်၊ ABBA, NYC, New York, USAဆရာတော်တရားကို နာရန် ရုပ်ပုံကြိုိံပ်ပၝ။
ူပည်တငြ်းရေးရာ သတင်းတိုထြာမိုးမခ (ရန်ကုန်)ိုံဝင်ဘာ ၂၆၊ ၂၀၀၇ မိတ်ဆက် ရန်ကုန်မြာူဂိလ်ြတုစလောင်းမဵား လိုက်လံ စစ်ဆေး ဆိံ္ဋူပမမြဵားအူပီူးပည်တငြ်း ပြုိံိံပ်မီဒီယာမဵား စောင်ရေ ကဵဆင်း ပီညဲရိုး သတင်းေုကာင့်7Day ဂဵာနယ်အဖုံူးပန်လည် ရိုက်ြိံပ်ရ ရန်ကုန်က ကလေးသူငယ်တြေုကား ရေပန်းစားနေတဲ့ တဘောင်ူမန်မိာိုံင်ငံသိုႚူပည်ပခရီးသည် လာရောက်မြ စံခဵိန်တင် ကဵဆင်း (ူမန်မာူ့ပည်ူပန်ရောက်လာတဲ့ ၀န်ုကီးခဵပြ် သိန်းစိန် နဲႚ လာုကိသြူ နအဖ စစ်အာဏာပိုင်အဖြဲႚမြ သန်းရြေ နဲႚ မောင်အေး - Photo AFP) မိတ်ဆက် မိုးမခကို ထူထောင်ခဲ့တဲ့ သူတေကြူပည်တော်မူပန်ိုံင်သေးဘူး။ သူတိုႚတေကြို ထားခဲူ့ပီး မိုးမခ စာနယ်ဇင်းကိုမန်မာူပည်ူပန်ခိုင်းလိုႚ မရဘူးလား။ူပည်တငြ်းမြ မိတ်ဆေတြေကြ မိုးမခဌာနခြဲ တခု အနေနဲႚ လက်ခုံကိဆြိုပီး လက်ဆင့်ကမ်း ဆောင်ရက်ြနေလိုႚ မရဘူးလား။ သဘောခဵင်းမ္တွတဲ့၊ အေူခခံမူခဵင်း တူသူတေကြ သူတိုႚလုပ်ခဵင်တဲ့ အစီအစဉ်တေကြို မိုးမခအနေနဲႚ ၀ိုင်းလုပ်လိုႚ မရဘူးလား။ ၂၀၀၆ မြာ မိုးမခကို အင်တာနက်ကော၊ လစဉ် စာစောင်ကောူဖစ်လာအောင် စီစဉ်ခဲ့တယ်။ ၂၀၀၇ မြာ မိုးမခရဲႚ ရေဒီယို ခဵစ်သူမဵား ဆစ်ဒနီက တာဝန်ယူပီး တနဂဿြေိံ ရေဒီယို အစီအစဉ်ကို ဆောင်ရက်ြလာတယ်။ ၂၀၀၇ မြာပဲူပည်တငြ်းက စာနယ်ဇင်းပညာရင်ြတေရြဲႚ ကူညီဝိုင်းဝန်းမတြေ ရလာတယ်။ ထိုင်း၊ အိံ္ဋယ နဲႚ စကဿာပူ က မိုးမခ မိတ်ဆေတြေရြဲႚ ယုံကည်စြာ ကူညီမတြေကြလည်း အခုလိုမဵြိး တနြ်းပိုႚပေးခဲ့တာပၝပဲ။ မိုးမခ (ဆန်ဖရန်စင်္စကို ) မြာ အင်တာနက်နဲႚ အထေထြေ လုပ်ငန်းတေအြူပင် ဗုဒ္ဌဟူးနေႚ ရေဒီယို အစီအစဉ် ရြိလာတယ်။ အခု မိုးမခ (ရန်ကုန်) ဆိုတာကို လုပ်ုကည့်နေတာ ရြေႚလကစူပီး အစမ်း သတင်းတိုထြာတြေ တင်ူဖစ်ဖိုႚမဵားပၝတယ်။ သူတိုႚတေရြဲႚ အူမင်နဲႚ အာဘော်တေကြို တိုက်ရိုက် တင်ဆက်ပၝလိမ့်မယ်။ ကဵနော်တိုႚကူပည်တငြ်းနဲႚႛ ဝေးနေတယ်ဗဵာ၊ ကိုယ့်တိုင်ူးပည်ထဲမြာ မနေရဘဲနဲႚ ကဵနော်တိုႚူပည်တငြ်းက စာဖတ်သူတေရြဲႚ အသံကို ဘယ်လောက် ကိုယ်စာူးပြိုံင်မြာလဲ။ အသံစုံ၊ အူမင်စုံအောင်ုကြိးစားတဲ့ သဘောပၝပဲ။ မိုးမခ (ရန်ကုန်) ကို အားပေးပၝ။ ကဵနော်တိုႚက ဆန်ဖရန်စင်္စကို မြာ၊ အယ်လ်အေမြာ၊ နယူးယောက်မြာ၊ ကိုလိုရာဒိုမြာ၊ ဇာနည်ဝင်းက ထိုင်းမြာ၊ ဦးပန်တဵာက ဆစ်ဒနီမြာ၊ ဘီအိုင်တီက အိံ္ဋယ မြာ၊ူပီးတော့ မိတ်ဆေတြခဵြိႚက စကဿာပူမြာ၊ ၀ိုင်ုးကြိးစားတာပၝ။ မိုးမခက ဘာမြ မရြိဘူး၊ ဘာမြူပန်မရဘူး၊ အိတ်ထဲကတောင် စိုက်ရသေးတယ်။ ဒၝပေမယ့် ကဵနော်တိုႚူမန်မာူပည် စာပေနဲႚ လူမဵြိး၊ ဘာသာ လတ်ြလပ်ခငြ့်အတကြ် တခုခု လုပ်ရတယ် ဆိုပီး ပေဵာ်တယ် (ထင်တာပဲ)။ူမန်မာူပည် ဒီမိုကရေစီရေး ကူညီမြ ရန်ပုံငြေ ကောင်းမြ ကလည်း ခင်ဗဵားတိုႚ၊ ကဵနော်တိုႚ အားလုံးရဲႚ တယောက်တလက် ကိုယ်ထူကိုယ်ထ အလုပ်တခုပဲလေ။ူမန်မာူပည်က သန်း ၅၀ သော လူထုအားလုံးဆီ ကိုတော့ မရောက်သေးဘူး။ ရောက်မြာပၝ။ မိုးမခ (ူမန်မာူပည်အြိံႚ) ဆိုပီူးဖစ်လာရင်ူဖစ်လာမြာပၝ။ မိုးမခ(ရန်ကုန်) က ပိုႚထားတာတြေ က ဒီလိုပၝ။ ရန်ကုန်မြာူဂိလ်ြတုစလောင်းမဵား လိုက်လံ စစ်ဆေိးိုံဝင်ဘာ ၂၂၊ ၂၀၀၇ - စက်တင်ဘာလအတငြ်း သံဃာတော်မဵာိးံငြ့်ူပည်သူမဵား၏ ဒီမိုကရေစီ တောင်းဆို ဆိံ္ဋူပပြဲအပေၞုကမ်းတမ်းစြာူဖိခြဲမကြိုိုံင်ငံတကာက မဵက်ဝၝးထင်ထင်ူမင်တြေႚခငြ့်ရလိုက်ူပီး၊ ၂လ အုကာမြာ စစ်အစိုးရကူဂိလ်ြတုစလောင်းမဵားကို လိုက်လံစစ်ဆေး စာရင်းမတ်ြယူနေပၝတယ်။ ရန်ကုန်ူမြိႚတငြ်ူးမြိႚနယ်မဵားအားလုံးမြာ စစ်ဆေးမြ မစတင်သေးပေမယ့်၊ ပုစန်ြတောင်၊ မဂဿလာတောင်ညနြ်ႚ နဲႚုကည့်ူမင်တိုင်ူမြိႚနယ်မဵားက ရပ်ကကြ် အခဵြိႚမြာ စာရင်းစတင် ကောက်ခံနေူပီူဖစ်ပၝတယ်။ူပီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာလကူငိမ်းခဵမ်းစြာ ဆိံ္ဋူပမမြဵားကို ပစ်ခတ်ူဖိခြဲခဲ့စဉ်မြာ၊ သတင်းထောက်မဵားနဲႚူပည်သူအခဵြိႚရဲႚ မတ်ြတမ်းတင် သတင်းပေးပိုႚမမြဵားေုကာင့်ိုံင်ငံတကာ မီဒီယာမဵားမြာ ထိပ်ဆုံးက နေရာယူနေခဲူ့ပီး၊ူပည်တငြ်းမြာလည်ူးဂိလ်ြတုစလောင်း ၀ယ်ယူအားပေး ၀ယ်ယူ တပ်ဆင်သူမဵား တရြိန်ထိုး တိုးတက်လာခဲ့ပၝတယ်။ ဆိံ္ဋူပမမြဵားကို ထိမိစြာ ဖော်ူပပေးခဲု့ကတဲ့ ဒီမိုကရက်တစ်ူမန်မာ့အသံ နဲႚ အယ်လ်ဂဵာဇီရားတိုႚဟာူမန်မာူပည်သူမဵား အုကားမြာ ရေပန်းအစားဆုံး လိုႚ ဆိုကပၝတယ်။ိုံင်ငံတကာ သတင်းရုပ်သံ ခဵယ်နယ်မဵားရဲႚ ဒဏ်ကို မခံစာိးိုံင်တော့လိုႚူဂိလ်ြတိုရုပ်သုံကည့်ရခြငြ့်ကို ထိန်းခဵပ်ြတော့မယ်လိုႚူပည်သူတြေုကားမြာေူပာဆိုနေုကခဵိန်မြာ စစ်အစိုးရက အခုလို လိုက်လံ စစ်ဆေးနေတာူဖစ်ပၝတယ်။ လိုက်လံ စစ်ဆေးသူအဖြဲႚမဵားမြာ ရ၊ယ၊က နဲႚ ဆက်သယ်ြရေး ၀န်ထမ်းမဵား ပၝ၀င်တယ်လိုႚ ဆိုပၝတယ်။ူဂိလ်ြတိုစလောင်း ပိုင်ဆိုင်သူမဵားကို စာရင်းကောက်ယူပေမယ့်ူဖတ်ြသိမ်ူးခင်းတော့ မူပလြုပ်သေးပၝဘူး။ ဆိံ္ဋူပမမြဵားအူပီူးပည်တငြ်း ပြုိံိံပ်မီဒီယာမဵား စောင်ရေ ကဵဆင်ိးိုံဝင်ဘာ ၂၂။ ၂၀၀၇ - စက်တင်ဘာ ဆိံ္ဋူပပြဲမဵာူးပီးဆုံးခဵိန်က စူပီူးပည်တငြ်းပြုိံိံပ် မီဒီယာမဵားရဲႚ စောင်ရေ သိသာစြာ ကဵဆင်းလာနေခဲ့တယ်လိုႚ အယ်ဒီတာအခဵြိႚကေူပာပၝတယ်။ အထူးသူဖင့်ကတော့ အပတ်စဉ် သတင်းဂဵာနယ်မဵားမြာ သိသာတယ်လိုႚ ဆိုပၝတယ်။ ” လူတေကြ ဆိံ္ဋူပမနြဲႚိုံင်ငံရေးသတင်းတေကြိုပဲ စိတ်ဝင်စားနေုကတယ်။ူပည်တငြ်း ဂဵာနယ်တေကြ ဒၝတေကြို ဖော်ူပခငြ့် မရုကဘူး။ အဲသည်တော့ သူတိုႚက ရေဒီယိုနဲႚူဂိလ်ြတု ရုပ်သံ သတင်းကိုပဲ အာရုံစိုက်နေုကတယ်။ တဘက်ကလည်း စီးပြားရေးက သိပ်ခဋ္ဋတ်ူခြံကဵ လာတော့၊ လူတေကြ ဂဵာနယ် မဂ္ဂဇင်းတြေ သိပ် မဖတ်ိုံင်ုကတော့ဘူး" လိုႚ အပတ်စဉ် သတင်းဂဵာနယ် တစောင်က လူငယ်အယ်ဒီတာ တဦးက ဆိုပၝတယ်။ ပီညဲရိုး သတင်းေုကာင့်7Day ဂဵာနယ်အဖုံူးပန်လည် ရိုက်ြိံပ်ရိုံဝင်ဘာ ၂၃၊ ၂၀၀၇ - လူႚအခငြ့်အရေး ကိုယ်စားလယြ် ပီညဲရိုး ရန်ကုန်ကို လာရောက်ခဲ့တဲ့ သတင်းကို မဵက်ြိာံဖုံးမြာ ရိုက်ြိံပ်ခဲ့တဲ့7Day အပတ်စဉ် သတင်းဂဵာနယ် ယခုအပတ် အဖုံးမဵားကိုပန်လည် ရိုက်ြိံပ်ခဲ့ရတယ်လိုႚ စာပေစိစစ်ရေး ၀င်ထက်ြနေသူ အယ်ဒီတာ တဦးကေူပာပၝတယ်။ စာပေစိစစ်ရေိးံငြ့် မတ်ြပုံတင်ဌာနက ခငြ့်ူပြူပီူးဖစ်ပေမယ့်၊ နောက်ဆုံးအခဵိန်မြာမြ ကပ်ူပီး သတင်းကို ခဵန်ခဲ့ဖိုႚ တာူးမစ်ခဵိန်မြာ7Day က အဖုံးမဵားကို ရိုက်ြိံပ်ူပီူးဖစ်နေပၝူပီ လိုႚ ဆိုပၝတယ်။ စိစစ်ရေးမြးမဵားနဲႚ ညနြ်ုကားရေးမြးမဵားကို ညြိံင်းပေမယ့် မအောင်ူမင်တဲ့အဆုံးမြာ ဂဵာနယ်ဟယ အဖုံးစာမဵက်ြိာံမဵာူးပန်ရိုက်ခဲ့ရတယ်လိုႚ ဆိုပၝတယ်။ ရန်ကုန်က ကလေးသူငယ်တြေုကား ရေပန်းစားနေတဲ့ တဘောင်ိုံဝင်ဘာ ၂၅၊ ၂၀၀၇ - စက်တင်ဘာလအတငြ်ူးငိမ်းခဵမ်းစြာ ဆိံ္ဋူပမမြဵားအပေၞ အုကမ်းဖက်ူဖိခြဲခဲူ့ပီိးံစ်ြလ အုကာ ရန်ကုန်က ကလေးငယ်မဵားအုကားမြာ တဘောင်တခု ရတ်ြဆိုနေုကတယ်လိုႚ ကေဵာင်းဆရာ တဦးက ဆိုပၝတယ်။ ရပ်ကက်ြအခဵြိႚက ကလေးငယ်မဵားဟာေူပးလြားဆော့ကစားရင်း - "ုကက်ဆူဆီထကြ်၊ စုကည်တက် …" လိုႚ ရတ်ြဆိုနေုကတယ် လိုႚ ဆိုပၝတယ်။ ဒီတုကိမ် အရေးအခင်းအူပီူးပည်သူမဵာုးကားမြာ ထူးခားသြားတဲိုံ့င်ငံရေး တက့်ကမကြ အမဵြိးသမီးမဵားနဲႚ ကလေးငယ်မဵား အုကားမြာ ပိုသိသာတယ်လိုႚ အူငိမ်းစား ၀န်ထမ်းတဦးကေူပာပၝတယ်။ သံဃာတော်မဵားကို သြေးထက်ြသံယို သတ်ူဖတ်မတြေဟြာ ယခင်ကိုံင်ငံရေးကို မတက့်ကလတြဲ့ အိမ်ရင်ြမမဵားနဲႚ ကလေးသူငယ်မဵား အုကားမြာပၝ စစ်အစိုးရ ဆန်ႚကဵင်ရေး စိတ်ဓာတ်မဵား ပေၞပေၝက်စေခဲ့တယ်လိုႚ ဆိုကပၝတယ်။ူမန်မိာိုံင်ငံသိုႚူပည်ပခရီးသည် လာရောက်မြ စံခဵိန်တင် ကဵဆင်ိးိုံဝင်ဘာ ၂၆၊ ၂၀၀၇ - ၂၀၀၇ိံစ်ြဟာူမန်မိာိုံင်ငံကိုိုံင်ငူံခားသား ခရီးသည်မဵား လာရောက်လည်ပတ်မြ အနည်းဆုံိးံစြ်ူဖစ်တယ်လိုႚ ခရီးသြား အေဂဵင်စီတစ်ခု က ဆိုလိုက်ပၝတယ်။ အထူးသူဖင့် စက်တင်ဘာ အရေးအခင်းအူပီး ခရီးသြားမဵားဟာ သူတိုႚရဲႚူမန်မာူပည်ခရီးစဉ်တေကြို ဖဵက်သိမ်းခဲု့ကတယ်လိုႚ အဆိုပၝ အေဂဵင်စီရဲႚ မန်နေဂဵာ အမဵြိးသမီးကေူပာပၝတယ်။ "Exotissimo တိုႚ၊ Diethelm တိုႚလို ခရီးသြား ကုမဍ္ဎဏီတေမြာတောင် Booking လုပ်ထားတဲ့ ခရီးစဉ်တေရြဲႚ ၇၀ % ကို ဆုံးရြံးသြာုးကတယ်။ ကဵမတိုႚ အလတ်စား ကုမဍ္ဎဏီတေကြတော့ အောက်တိုဘာလကစူပီး ခရီးသြား တယောက်မြ မရြိတော့ဘူး။" လိုႚ သူမက ညည်းညပြၝတယ်။ ခရီးသြား အေဂဵင်စီမဵားသာမက ဟိုတယ်ုကီးမဵားပၝ ခရီးသည်မဵား မရြိလိုႚ စိတ်ပဵက်နေုကတယ်လိုႚ လည်းေူပာူပပၝသေးတယ်။ " ဆီဒိုးနား ဟိုတယ်ုကီးတေမြာတောင် ဧည့်သည် အယောက် ၂၀ လောက်ပဲ ရြိတယ်" လိုႚ သူမက ထပ်လောင်းေူပာပၝတယ်။ ခရီးသြားလုပ်ငန်းမဵားကို မြီခိုနေရတဲ့ အူခာ်းစီးပြားရေး လုပ်ငန်းမဵားလည်း ကဵဆင်းလာနေပၝတယ်။ "ကဵမတိုႚ ဒီမြာ ဆိုင်ဖငြ့်တာ ၅ိံစ်ြရြိူပီ။ ဒီိံစြ် ခရီးသြား အနည်းဆုံးပဲ" လိုႚ ငေဆြောင် အပန်းေူဖ ကမ်းေူခမြာ ထမင်းဆိုင်ဖငြ့်သူ အမဵြိးသမီးတဦးက ဆိုပၝတယ်။